YEYINTNGE(CANADA): Wednesday, June 13
နယ်မြေအေးချမ်း သွားသော်လည်း ရခိုင် တိုင်းရင်းသားများ နေရပ်သို့ မပြန်ရဲ
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုများမှာ ဒေသအချို့တွင် ပြန်လည်တည်ငြိမ်ပြီ ဖြစ်သော်လည်း ဒေသခံ ရခိုင် တိုင်းရင်းသားများမှာ ၎င်းတို့၏ နေရပ်သို့ ပြန်မသွားရဲဘဲ ရှိနေကြောင်း ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်တွင် ကယ်ဆယ်ရေး စခန်း ဖွင့်လှစ်ထားသူများ ထံမှ သိရသည်။
“ဟိုမှာ ဘင်္ဂလီတွေ များတော့ တစ်ယောက်မှ မပြန်ရဲဘူး။ ပြန်သွားရင်လည်း သူတို့မှာ နေစရာအိမ်မှ မရှိတော့တာ” ဟု မောင်တောမြို့ ဗဟိုဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှ သံဃာတစ်ပါးက မိန့်ကြားသည်။
မောင်တောမြို့၏ လက်ရှိ အခြေအနေမှာ တည်ငြိမ်မှု ရှိသော်လည်း နယ်ကျေးရွာများတွင်မူ စိတ်ချရသည့် အနေအထားသို့ မရောက်ရှိ သေးကြောင်း၊ ဘင်္ဂလီ အကြမ်းဖက်သူများမှာ လျှပ်တပြက်အတွင်း အကြမ်းဖက်မှုများကို ပြုလုပ်ပြီး တစ်ဖက်နိုင်ငံသို့ အလွယ်တကူ ပြန်သွားနိုင်သဖြင့် ဒေသခံ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများမှာ နေရပ်သို့ မပြန်ရဲခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ရခိုင်းတိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေး ပါတီဝင် မောင်တော ဒေသခံများက ပြောကြားသည်။
“နိုင်ငံတော်ရဲ့ ဝင်ပေါက် အနောက်တံခါးကို ကျွန်တော်တို့ ရခိုင်လူမျိုးတွေက နှစ်ပေါင်းများစွာ အသေခံပြီး ဖြစ်ဖြစ်၊ အငတ်ခံပြီး ဖြစ်ဖြစ် စောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ အစိုးရ ဝန်ထမ်းတွေက အကျင့်ပျက်ခဲ့တာတွေ ရှိတယ်။ ပိုက်ဆံပေးပြီး လိုချင်တာတွေ ဖန်တီးသွားခဲ့တာတွေ ရှိတယ်။ အောက်ခြေမှာ ဖြစ်ခဲ့တာတွေက ကျွန်တော်တို့ နေခဲ့တဲ့ ခေတ်အဆက်ဆက်ပဲ …။
မဲရဖို့အတွက် လူတွေသွင်းခဲ့တဲ့ အမှားပဲ။ ခေတ်အဆက်ဆက်မှာ မှားခဲ့တာတွေ အများကြီးပဲ။ သတိမရှိခဲ့တဲ့ အခါကျတော့ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တော ကျဆုံးမလို ဖြစ်နေပြီ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သဘောထားကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပိုက်နက်မြေကို တစ်လက်မမှ အဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူး။ နှစ်ပေါင်းများစွာ ဘိုးဘေးစဉ်ဆက် အမွေပေးခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြေ၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေ တစ်လက်မမှ မပေးဘူး။ အဆုံးရှုံးမခံဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ကာကွယ်သွားမှာပါ” ဟု ဒေါက်တာ အေးမောင်က ပြည်တွင်း မီဒီယာများသို့ ပြောကြားသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဘင်္ဂါလီ လူမျိုးများ၏ ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုကြောင့် သေဆုံးသူ ဦးရေမှာ ၂၁ ဦးသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး ဒေသခံ ရခိုင်တိုင်းရင်းသား သုံးသောင်းခန့်မှာ အသက်ဘေး အန္တရာယ်ကြောင့် ဘေးဒုက္ခသည်များအဖြစ် ကယ်ဆယ်ရေး စခန်းများတွင် ရောက်ရှိ ခိုလှုံ နေကြရသည်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 6/13/20120အကြံပြုခြင်း
ဇူလိုင် ၄ ရက်နေ့ လွတ်တော်များ ပြန်လည်ခေါ်ယူ
အခြေခံဥပဒေကို မလိုက်နာလို့ အခြေခံ ဥပဒေရုံးက ဒီနေ့ NLD ကို စာပို့
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က WEF မှာ Burma လို့ သုံးနှုန်းလို့တဲ့ အခြေခံ ဥပဒေရုံးက ဒီနေ့ NLD ကို စာပို့သတဲ့ ၊ အခြေခံဥပဒေကို မလိုက်နာလို့ ကျင့်ဝတ် ဖောက်ဖျက် သတဲ့ .... ဒါပေမယ့် အခြေခံဥပဒေမှာ ပါတာက Republic of Union of Myanmar လို့ သုံးနှုန်းရမယ်လို့ပဲ ပါတာလေ ၊ Burma လို့ မသုံးရဘူးလို့ မပါပါဘူးးး
ကချင်ပြည်နယ်ကို ဂျိန်းဖောတို့မြေလို့ပြောလည်း လူတိုင်းနားလည်နေတာပဲ .....း))
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 6/13/2012 1 အကြံပြုခြင်း
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဥရောပခရီးစဉ်စတင် အမျိုးသာ ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဇွန်လ ၁၃ ရက်နေ့ ယနေ့ နံနက် ၉ နာရီ ၄၅ မိနစ်အချိန်တွင် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်မှ ထိုင်းလေကြောင်းလိုင်း (TG) ဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာသွားကြောင်း သိရှိရသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံမှ တစ်ဆင့် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ဂျနီဗာမြို့သို့ သွားရောက်မည် ဖြစ်ပြီး ဇွန်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် ကမ္ဘာ့အလုပ်သမား အဖွဲ့ချုပ် (ILO)ညီလာခံတွင် မိန့်ခွန်း ပြောကြားမည် ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ဇွန်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် နော်ဝေနိုင်ငံ အော်စလိုမြို့သို့ သွားရောက်ကာ ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆုကို ကိုယ်တိုင်လက်ခံ ရယူမည် ဖြစ်သည်။ ဇွန်လ ၁၈ ရက်နေ့တွင် အိုင်ယာလန်နိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာမည် ဖြစ်ပြီး ယူတူး (U2) တေးဂီတအဖွဲ့ ဖျော်ဖြေပွဲသို့ တက်ရောက်မည် ဖြစ်သည်။ ဆက်လက်၍ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် အဖွဲ့ (Amnesty International) က ချီးမြင့်သော Ambassador of Conscience ဆုကို လက်ခံရယူမည်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ဇွန်လ ၁၈ ရက်နေ့ညတွင် ဗြိတိန်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်မည် ဖြစ်ပြီး ဇွန်လ ၂၆ ရက်နေ့အထိ နေထိုင်မည် ဖြစ်ကာ ဗြိတိန်နိ်ုင်ငံ အထက်လွှတ်တော်တွင် မိန့်ခွန်း ပြောကြားမည် ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သော ၄င်း၏ အသက် ၆၇ ပြည့် မွေးနေ့ကိုလည်း ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင် ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ဇွန်လ ၂၆ ရက်နေ့ နေ့လည်ပိုင်းတွင် ပြင်သစ်နိုင်ငံသို့ ဆက်လက် ထွက်ခွာမည် ဖြစ်ပြီး ဇွန်လ ၂၉ ရက်နေ့တွင် ပြင်သစ်နိုင်ငံမှ ပြန်လည် ထွက်ခွာလာမည် ဖြစ်ပြီး ဇွန်လ ၃၀ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ ခရီးစဉ်မှာ ၄င်းနိုင်ငံများ၏ အစိုရများမှ ဖိတ်ကြားချက်အရ သွားရောက် လည်ပတ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်အတူ ဦဇေယျာသော်၊ ဦးခွန်သာမြင့်၊ ဒေါ်တင်မာမြင့်နှင့် ဦးနေခြည်ဝင်း တို့ လိုက်ပါသွားကြကြောင်း သိရသည်။ hu Daun ပြည်သူ့ ခေါင်းဆောင် ပြည်သူ့ ကိုယ်စားလှယ်တော် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆွစ္စလန်နိုင်ငံ ဂျီနီဗာမြို့ သို့ကောင်းမွန်စွာဖြင့် ရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ကြောင်း....။
Canada calls for peaceful solution in Rekhine State of Burma
rInformation Released by Canadian Friends of Burma – Ottawa June 13, 2012
The Government of Canada addedavoice yesterday in calling forapeaceful solution regarding the ongoing communal riots started last week in Rekhine state of Burma.
"We condemn the attacks and call on all sides to work towardapeaceful solution to this conflict," MP Lois Brow made the statement in the House of Commons on behalf of the Government of Canada." She further added, "We urge security forces to protect the rights and safety of all concerned and to facilitate access by humanitarian organizations wherever assistance is needed."
Burma's western Rekhine state witnessedawave of violence since last week between ethnic Rekhine and Rohingya Muslims in response to an alleged gang rape and murder ofaRekhine woman. This culminated in an attack on Rohingya bus passengers that left several people dead. Last Fridayathousand of Rohingyas rioted inatown closed to Bangladesh border, destroying properties and houses of Rekhine withascore of death.
The riots are now spreading to other parts of the state, especially Sittwe, the capital city of the state. The government media said 21 people confirmed dead, 4,000 people displaced and 1,500 houses including monasteries and mosques destroyed. There is an increasing concern on further escalation of tension even under the curfew being issued.
There isageneral acceptance of the term 'Burmese-Muslim' in Burma; however, local Rekhine haveaparticular resentment towards 'Rohingya' who are culturally, linguistically and religiously aligned to Bangladesh. British brought many of them to Burma during its colonization period. In 1950s,aJihad movement started in Burma and Mujahedeen took up arms. When failed, Rohingyas started seeking for an ethnic nationality status that is widely rejected by the majority of people in Burma.
Nevertheless, Canadian Friends of Burma (CFOB) hopes all parties concerned would quickly findasolution to end the current tension and reachalong-lasting settlement for peace and security in Rekhine state.
The Canadian Friends of Burma (CFOB) is federally incorporated, national non-governmental organization working for democracy and human rights in Burma since 1991. Contact: Suite 206, 145 Spruce St., Ottawa, K1R 6P1; Tel: 613.237.8056; Email: cfob@cfob.org; Web: http://www.cfob.org
ရခိုင်ပြည်တွင်း အစွန်းရောက်အကြမ်းဖက် ရိုဟင်ဂျာခေါ်ဘင်ဂါလီလူမျိုးခြားများ ၏ မြန်မာ ရခိုင်လူမျိုး များအပေါ် လူမျိုးတုန်းတိုက်ခိုက်ခြင်းများအပေါ် ယူကေမှ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမှ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်
၁၃ ဂျွန် ၂၀၁၂
သတ်ဖြတ်ခြင်းလုယက်ခြင်း၊ရွာမီးရှို့ခြင်းများနှင့်ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာ ရခိုင်လူမျိုးများအပေါ်ကျူးလွန်သောပြစ်မှူများအားပြင်းထန်စွာရှုံ့
ချလိုက်သည်။ ထိုရိုဟင်ဂျာအမည်ခံဘင်္ဂလီမူဆလင်များသည်ဘင်္ဂလားဒေရှ့်မှလာသောတရားမဝင်ဘင်္ဂလီလူမျိူးများသာဖြစ်သည်။ ထိုရိုဟင်ဂျာအမည်ခံဘင်္ဂလီမူဆလင်များသည်ထောင်ပေါင်းများစွာသောဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ရခိုင်လူမျိူးများနှင့်မြန်မာလူမျိူးများကို
သတ်ဖြတ်ခဲ့သည်။ ယနေ့မြန်မာပြည်အနောက်ပိုင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံနှင့်ထိစပ်လျှက်ရှိသောမောင်းတောမြို့နယ်သည်ဘင်္ဂလီမူဆလင်များ ၉၈ ရာခိုင်းနုန်းအထိဝင်ရောက်တည်ရှိနေသည့်ဒေသဖြစ်သည်။ဇွန်လ၈ရက်၂၀၁၂ခုနှစ်တွင်ထိုရိုဟင်ဂျာအမည်ခံဘင်္ဂလီမူဆလင်များသည်ငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်လျှက်ရှိသောဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာရခိုင်လူမျိူးများလူနည်းစုကိုမောင်းတောမြို့နယ်၌မီးရှို့သတ်ဖြတ်လျှက်ရှိသည်။ထို့အပြင်ဗုဒ္ဓဘာသာရွာများကိုမီးရှို့ခြင်း၊ဗုဒ္ဓဘာသာအိမ်များကိုဖျက်စီးခြင်းနှင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများကိုဖျက်စီးလျှက်ရှိသည်။သို့ပါ၍ထိုရိုဟင်ဂျာအမည်ခံဘင်္ဂလီမူဆလင်များ၏တိုက်ခိုက်ခြင်းရန်မှဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြန်မာရခိုင်လူမျိုးများမှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရလျှက်ရှိသည်။ရရှိသောသတင်းများအရဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ရခိုင်ရွာပေါင်း(၂၀)ကျော်ကိုပြာပုံအတိဖြစ်အောင်ထိုရိုဟင်ဂျာအမည်ခံဘင်္ဂလီမူဆလင်များကမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးဖြစ်သည့်အပြင်၎င်းရိုဟင်ဂျာအမည်ခံဘင်္ဂလီမူဆလင်များကဗုဒ္ဓဘာသာရခိုင်နှင့်မြန်မာလူမျိုးတိုင်းကိုရှာဖွေပြီးသတ်ဖြတ်လျှက်ရှိသည်။နောက်ဆုံးရသတင်းများအရဗုဒ္ဓဘာသာရခိုင်နှင့်မြန်မာလူမျိုးများဒါဇင်ပေါင်းမြောက်များစွာအသတ်ခံရပီးထောင်ပေါင်းများစွာ ထွက်ပြေးတိမ်း ရှောင်နေရပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ဤကဲ့သို့သော ရိုဟင်ဂျာ အမည်ခံ ဘင်္ဂလီမူဆလင် များ၏ အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံ့ချလိုက်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်သမတ္တဦးသိန်းစိန်ဦးဆောင်သောအစိုးရအားပြတ်သားသောအရေးယူဆောင်ရွတ်မူကိုပြုလုပ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာရခိုင်လူမျိုးများ၏အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကိုကာကွယ်ပေးရန်တောင်းဆိုလိုက်သည်။ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင်မြန်မာအစိုးရအားပြတ်သားသောမှန်ကန်သောခြေလှမ်းကိုမြန်မြန်ပြတ်ပြတ်သားသားချပြီးရိုဟင်ဂျာအမည်ခံဘင်္ဂလီမူဆလင်များတရားမဝင်မြန်မာပြည်သို့လာရောက်ပြီးကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ခြင်း၊လူမျိုးတုန်းတိုက်ခိုက်ခြင်း၊အကြမ်းဖက်ခြင်းစသည့်လုပ်ရပ်များကိုအလျှင်အမြန်တားဆီးကာကွယ်ပါရန်တောင်းဆိုလိုက်သည်။ကျွန်ုပ်တို့ အနေဖြင့်ရွေးချယ်ခံထားရသောလွှတ်တော်အမတ်များအားလုံးတို့အားမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတရားမဝင်ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံဘင်္ဂလီမူဆလင်များမတရားသဖြင့်ဝင်ရောက်ကာမြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ်မတရားတောင်းဆိုခြင်းများကိုကာကွယ်ရန်အတွက်လုပ်ဆောင်ကြပါရန်အထူးတိုက်တွန်းနိုးဆော်လိုက်သည်။ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်မြန်မာအရေးလှုပ်ရှားနေကြသောဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းများ၊တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းများအားဤအကြမ်းဖက်ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံဘင်္ဂလီမူဆလင်များ၏လုပ်ရပ် များအားပြင်းထန်စွာရှုံ့ချကြရန်တောင်းဆိုလိုက်သည်။ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်မြန်မာပြည်ပမီဒီယာများအားယခုရိုဟင်ဂျာအမည်ခံဘင်္ဂလီမူဆလင်အကြမ်းဖက်သမားများအားမြောက်ထိုးပင့်ကော်ပစားပေးခြင်းနှင့်တကွ၎င်းတို့ဘက်မှဘက်လိုက်ပြောဆိုနေသည်များအားရပ်တန့်ပါရန်နိုးဆော်တိုက်တွန်းလိုက်သည်။ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်နိုင်ငံတကာမီဒီယာတို့ကိုလည်းရိုဟင်ဂျာအမည်ခံဘင်္ဂလီမူဆလင်အစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်သမားများကိုထောက်ခံရေးသားပြောဆိုခြင်းများကိုရပ်တန့်ပါရန်တောင်းဆိုလိုက်သည်။ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကိုလည်းထိုရိုဟင်ဂျာအမည်ခံဘင်္ဂလီမူဆလင်အစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်သမားများကိုထောက်ခံရေးသားပြောဆို ခြင်းများကိုရပ်တန့်ပါရန်တောင်းဆိုလိုက်သည်။ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ထိုရိုဟင်ဂျာဟုဆိုနေသူများအားနိုင်ငံတကာမိသားစုများအနေဖြင့်၎င်းတို့သည်မြန်မာပြည်၏တိုင်းရင်းသားတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ပြောဆိုနေခြင်းများအားရပ်တန့်ပါရန်တိုက်တွန်းနိုးတောင်းဆိုလိုက်သည်။ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ယခုရိုဟင်ဂျာဟုခေါ်သောကိစ္စသည်မြန်မာနိုင်ငံ၏လူ့အခွင့်အရေးကိစ္စမဟုတ်ဘဲနဲ့တရားမဝင်ကျုးကျော်ဝင်ရောက်လာသောဘင်္ဂလီမူဆလင်များ၏မတရားလုပ်ရပ်သာဖြစ်သည့် အကြောင်းသိစေအပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ အနေဖြင့်ရဲရင့်သောဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြတ်ပြတ်သားသားချခဲ့သော(၈၈)မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ၏ ရိုဟင်ဂျာ အမည်
ခံဘင်္ဂလီမူဆလင်များမှာမြန်မာနိုင်ငံသားမဟုတ်၊မြန်မာပြည်၌ပေါက်ဖွားခဲ့သူများမဟုတ်၊မြန်မာမဟုတ်ဟုပြတ်သားရဲရင့်စွာပြောဆို ခဲ့ခြင်းကိုလှိုက်လှဲဝမ်းမြောက်စွာကြိုဆိုလိုက်သည်။
ဆောင်ရွက်နေတဲ့ကိစ္စသာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ယခုရိုဟင်ဂျာကိစ္စကို အခုအပြတ်ပြောပါမယ်။ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ အခုဖြစ်နေတဲ့ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်းတောကိစ္စတွေမှာ နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကြီးတွေက မြန်မာနိုင်ငံကိစ္စကို အပြည်အစုံနားမလည်ဘဲ ၀င်ရောက်ပတ်သက်စွက်ဖက်နေတာကို လုံးဝလက်မခံပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ အချုပ်အခြာကိုထိပါးတယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာနှင့် မျက်နှာမပျက်အောင်ဒုက္ခသည်များလို့ ယူဆပြီး လူသားခြင်းစာနာမှုနှင့် ကိုယ်ခြင်းစာလိုက်လျောမှုကို နိုင်ငံကြီးတွေက ဖိအားပေးလာရင် ကျွန်တော်တို့ လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။ ဆက်ပြီးဖိအားပေးလာရင် ကျွန်တော်တို့ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေအားလုံးက အမျိုးသားရေးပြဿနာအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် လက်တွဲဖြေရှင်းသွားမယ်” ဟု ပြောသွားခြင်းကိုလှိုက်လှဲဝမ်းမြောက်စွာကြိုဆိုလိုက်သည်။
“အခု ကျွန်တော်တို့ ဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာဟာ မြန်မာနိုင်ငံသား အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များကြားမှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ပြဿနာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါဟာလူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး၊ အသွင် ဖန်တီးမယ်ဆိုရင်လည်း ဒါဟာ မရိုးမသားလုပ်ဆောင်နေတဲ့ ဖန်တီးမှုမျိုးဘဲ သတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေ နှစ်ပေါင်းများစွာ ခံစားနေရတဲ့ ဝေဒနာသူတို့ ခံစားမှုကိုလည်း အလေးအနက်ထားဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ ကာလရှည်ကြာစွာ ကျွန်တော်တို့ သည်းခံ နေလာခဲ့တာ ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာပါ။ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအနေနဲ့အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကို ကြိုးစားနေတဲ့အခါမှာ အတက်နိုင်ဆုံး အငြင်းပွားစရာ ကိစ္စတွေ၊ မပြောမဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေကလွဲပြီး တော်တော်များများကို သည်းခံပြီး ရှောင်ရှားနေခဲ့ပါတယ်။ အခုနေမှာတော့ ရိုဟင်ဂျာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အတိအလင်းပြော ပါမယ်။ ရိုဟင်ဂျာသည် ကျွန်တော်တို့ တိုင်းရင်းသားမဟုတ်ပါဘူး။ အခုဖြစ်နေတဲ့ ဘူးသီးတောင် မောင်တောကိစ္စသည် နယ်စပ်ကနေ တရားမ၀င် ဖြတ်ကျော်လာတဲ့ ၀င်ရောက်လာတဲ့ ရိုဟင်ဂျာများနဲ့ ပြည်ပသွေးထိုးလှုံဆော်မှုတွေပါ ပါနေတယ်လို့မြင်တယ်။ နိုင်ငံတကာ နိုင်ငံကြီးတွေအနေနဲ့လည်းဘဲ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေ ပြဿနာကို ကောင်းစွာနားလည်း သိကျွမ်းခြင်းမရှိဘဲနဲ့ ရိုဟင်ဂျာအရေးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့ ပြောဆိုနေကြတာတွေဟာ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာကို တိုက်ရိုက်ထိခိုက်တယ်လို့ဘဲ ကျွန်တော်တို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ ” ဟု ပြောသွားခဲ့ခြင်းကိုလှိုက်လှဲဝမ်းမြောက်စွာကြိုဆိုလိုက်သည်။
သာရခိုင်နှင့်ဗမာလူမျိုးများအပေါ်အမျိုးတုန်းတိုက်ခိုက်ခြင်း၊ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ ရွာမီးရှို့ခြင်း၊ ပစ္စည်းလုယက်ခြင်း၊ မြေလုယက်ခြင်းတို့အားကျုးလွန်သောထိုရိုဟင်ဂျာအမည်ခံဘင်္ဂလီလူမျိုးများအားရှုံ့ချပါရန်တိုက်တွန်းနိုးဆော်အပ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ထိုကဲ့သိုရိုဟင်ဂျာအမည်ခံဘင်္ဂလီမူဆလင်များ၏ လူမျိုးတုန်းတိုက်ခိုက်ခြင်း၊ မတရားကျူးကျော်စော်ကားသော
လုပ်ရပ်များအားလုံးကိုပြင်းထန်စွာရှုံ့ချလိုက်ကြောင်းကမ္ဘာကသိစေအပ်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်အစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်ရိုဟင်ဂျာခေါ်ဘင်ဂါလီလူမျိုးခြားများ၏လုပ်ရပ်ကိုရှုပ်ချလိုက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးကအမျိုးသားရေးအသွင်ဖြင့် ရင်ဆိုင်ကြရန် တောင်းဆိုလိုက်သည်။
•International Burmese Monks Organisation (IBMO) •Burmese Christian Society in UK •Arakan League for Democracy –Exile (ALD-UK) •National League for Democracy (NLD-LA-UK) •88 New Generation Students (UK) •Oxford Burma Benefit Fund •Shan Progressive Society •Chin Democratic Community •Burmese Students in UK •Burma Democratic Concern (BDC)
ရခိုင်အာဂျိတ်တောင် ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းသို့ လှူဒါန်းမှုများ
ဒါရိုက်တာဝိုင်းမှ ငွေကျပ် ၁၅ သိန်းကို အာဂျိတ်တောင် ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းသို့ လှူဒါန်းနေစဉ်
သရုပ်ဆောင် ပြေတီဦးအား တပ်ဦးပရိယတ္တိ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွင် တွေ့ရစဉ်
Eleven Media Group မှ ငွေကျပ်သိန်း ၂၀ ကို အာဂျိတ်တောင် ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွင် လှူဒါန်းနေစဉ်
ရခိုင်ပြည်နယ်မှ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲ ဖြစ်နေကြသော ပြည်သူများအား ကူညီထောက်ပံရေးအဖွဲ့ (ယာယီ) သို့ ဦးဇော်ဇော်မှ ငွေကျပ်သိန်း ၅၀၀ လှူဒါန်းစဉ် (ရခိုင်ပြည်နယ်မှ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲ ဖြစ်နေကြသော ပြည်သူများအား ကူညီထောက်ပံရေးအဖွဲ့ (ယာယီ) သည် နာရေးကူညီမှုအသင်း (စစ်တွေ)မှ ဦးဆောင်၍ ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်း၏ အမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါအဖွဲ့သို့ ဆက်သွယ် လှူဒါန်းလိုသူများအနေဖြင့် ဖုန်း ၀၄၃-၂၂၄၇၅၊ ၀၉၈၅၀၀၉၄၄၊ ၀၉၈၅၀၀၂၄၁ သို့ ဆက်သွယ် လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။)
လူငယ်မီဒီယာ အုပ်စုကိုယ်စား ငွေကျပ်သိန်း ၅၀ ကို အာဂျိတ်တောင် ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းသို့ လှူဒါန်းနေစဉ်
သရုပ်ဆောင် ပြေတီဦးမှ ငွေကျပ်သိန်း ၂၀ ကို အာဂျိတ်တောင် ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းသို့ လှူဒါန်းနေစဉ်
ဇွန်လ ၁၃ ရက်နေ့ စစ်တွေမြို့ မြင်ကွင်း
စစ်တွေမြို့ ဦးရဲကျော်သူကျောင်းတိုက် ဓမ္မာရုံရှိ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းသို့ ရောက်ရှိနေသော ရခိုင်တိုင်းရင်သားများကို ဇွန်လ ၁၃ ရက်နေ့(ယနေ့)က မြင်တွေ့ရစဉ်
၁၄၄ အမိန့်ထုတ်ပြန်ကြေငြာချင်းအား လိုက်လံကြော်ငြာနေသည်ကို မြင်တွေ့ရစဉ်
မောင်တောမြို့ ယနေ့ အခြေအနေသည် ညနေ ၄နာရီ ၅၀ မိနစ်အချိန်အထိ တည်ငြိမ်အေးဆေးလျက်ရှိပြီး မိုများလည်း ရွာသွန်းနေကြောင်းနှင့် ဖွင့်လှစ်ထားသော ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများတွင် လာရောက်ခိုလှုံသော ဒုက္ခသည်များအတွက် စားနပ်ရိက္ခာလုံလောက်မှု မရှိသည့် အခြေအနေကို ကြုံတွေ့နေရကြောင်း မောင်တောမြို့ခံတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသော အကြမ်းဖက်မှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကြေညာချက်တစ်စောင် ထုတ်ပြန် ရခိုင်တိုင်းရင်းသား လူမျိုးဟူသော စကားရပ် ပါဝင်ခြင်း မရှိ မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသော အကြမ်းဖက်မှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန်က ကြေညာချက်တစ်စောင်ကို ဇွန်လ ၁၁ ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့ သည်။ အဆိုပါ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွင် ရခိုင်တိုင်းရင်းသား လူမျိုးဟူသော စကားရပ် ပါဝင်ခြင်း မရှိခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည်။
စစ်တွေမြို့တွင်း ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းအချို့သို့ ရောက်ရှိနေသော ဒုက္ခသည် စာရင်း အဒိဒါန်ကျောင်း ၂၀၀၀ ဦးခန့် ရွေစေတီကျောင်း ၁၀၀၀ ဦးခန့် ရဲကျော်သူကျောင်း ၁၀၀၀ ဦးခန့် ဆင်ကူးလမ်းဓမ္မာရုံ ၆၀၀ဦးခန့် မင်းခံဓမ္မာရုံ ၅၀၀ ဦးခန့် ဆုတောင်းပြည့်ကျောင်း ၄၅၀ ဦးခန့် ဂြစ်ချေကျောင်း ၄၀၀ ဦးခန့် စပါးထားကျောင်း ၄၀၀ ဦးခန့် ဥာဏစက္က ၃၅၀ ဦးခန့် ဓတ်လျင်ကျောင်း ၃၅၀ ဦးခန့် ယတ္တရာကျောင်း ၃၅၀ ဦးခန့် ရွာကြီးမြောက်ဓမ္မာရုံ ၃၀၀ ဦးခန့် စိတ္တသုခကျောင်း ၂၅၀ ဦးခန့် မရာမာကြီးကျောင်း ၂၅၀ ဦးခန့် ရွာကြီးတောင် ဓမ္မာရုံ ၂၅၀ ဦးခန့် ခေါင်းလောင်းကျောင်း ၂၅၀ ဦးခန့် ဓမ္မစင်္ကြာကျောင်း ၂၀၀ ဦးခန့် ၀ါယမကျောင်း ၂၀၀ ဦးခန့် ကယိချောင်းကျောင်း ၂၀၀ ဦးခန့် ဘုရားလေးဆူကျောင်း ၂၀၀ ဦးခန့် လမ်းမတော်မြောက် ဓမ္မာရုံ ၂၀၀ ဦးခန့် အမျိုးသားကျောင်း ၁၅၀ ဦးခန့် ဇေယျာသီရီကျောင်း ၁၅၀ ဦးခန့် အသောကရုံကျောင်း ၁၅၀ ဦးခန့် ဓမ္မရိပ်သာကျောင်း ၁၂၀ ဦးခန့် ဗုဒ္ဓေါမွန်ကျောင်း ၁၂၀ ဦးခန့် ဇောတိကာရုံကျောင်း ၁၀၀ ဦးခန့် ဥာဏိကာရာမကျောင်း ၁၀၀ ဦးခန့် ဘောဂသုခကျောင်း ၁၀၀ ဦးခန့် သရက်တောကျောင်းတိုက် ၇၀ ဦးခန့် သာသနာ့ဗိမာန် ၅၀ ဦးခန့် စစစရုံး ၅၀ ဦးခန့် မဟာကုသလကျောင်း ၅၀ ဦးခန့် ယခုဖေါ်ပြထားသော ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများနည်းတူ အခြား ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းအချို့လည်း ဖွင့်လှစ်ထားပြီး ယင်းစခန်းများရှိ ဒုက္ခသည် စာရင်းများကိုလည်း ဆက်လက် စုံစမ်းလျက်ရှိပါသည်။
Peace Donor Support Group အဖွဲ့နှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေသော ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှုးချုပ်၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် ဗီဂျေးနမ်ဗီယာသည် ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့သို့ ဇွန်လ ၁၃ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းက ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး စစ်တွေမှတစ်ဆင့် မောင်တောသို့ ဆက်လက်ထွက်ခွါမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ ဗီဂျေးနမ်ဗီယာသည် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းဌေးနှင့်အတူ စစ်တွေသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ကြောင်း၊ ၄င်းတို့နှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အစ္စလာမ်ဘာသာရေးအဖွဲ့ကြီးမှ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်(၁၅)ဦး လိုက်ပါသွားခဲ့ကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးမှ အကြီးတန်းအရာရှိတစ်ဦး၏ facebook စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားနေသည့် အကြမ်းဖက်မှုများကြောင့် ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက် ထောက်ပံလူဒါန်းငွေများကို ရခိုင်ပြည်နယ် တာဝန်ရှိသူများနှင့် ကယ်ဆယ်ရေး စခန်းများသို့ မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်၊ မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ် ကလပ်အသင်းများ၊ ပြည်တွင်းမီဒီယာအချို့ နှင့် အနုပညာရှင်အချို့သည် ဇွန်လ ၁၃ ရက် ယနေ့ နံနက် ၉ နာရီခွဲတွင် စစ်တွေမြို့ မြို့တော်ခန်းမတွင် သွားရောက် လှုဒါန်းခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အလှူရှင်များသည် အာဂျိတ်တောင် ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း၊ တပ်ဦးပရိယတ္တိစာသင်တိုက် ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများသို့ အလှူငွေများ၊ စောင်များ၊ အ၀တ်အထည်များ၊ ပန်းကန်များ၊ ခေါက်ဆွဲခြောက်များ နှင့် အခြား လိုအပ်သောပစ္စည်းများအား သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ကြပါသည်။ ဦးအောင်ကိုဝင်း (နာယက၊ မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်) ကျပ်သိန်း ၁၀၀၀ ဦးဇော်ဇော် (ဥက္ကဌ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်) ကျပ်သိန်း ၁၀၀၀ ဦးရန်ဝင်း (ဥက္ကဌ၊ ဧရာဝတီယူနိုက်တက် ဘောလုံးအသင်း) ကျပ်သိန်း ၃၀၀ ဦးဖြိုးကိုကိုတင့်ဆန်း (ဥက္ကဌ၊ နေပြည်တော် ဘောလုံးအသင်း) ကျပ်သိန်း ၃၀၀ ဦးလှဌေး (ပိုင်ရှင်၊ ဇွဲကပင်ဘောလုံးအသင်း) ကျပ်သိန်း ၂၀၀ ဦးဇော်မင်းသိန်း (ပိုင်ရှင်၊ ရက္ခပူရ ဘောလုံးအသင်း) ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ဒေါက်တာစိုင်းဆမ်ထွန်း (ပိုင်ရှင်၊ ရတနာပုံ ဘောလုံးအသင်) ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ဦးသူရိန် (ဥက္ကဌ၊ ဇေယျာရွှေမြေဘောလုံးအသင်း) ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ဦးအောင်မိုးကျော် (ပိုင်ရှင်၊ ဟံသာဝတီ ဘောလုံးအသင်း) ကျပ် သိန်း ၁၀၀ ဦးဝမ်စိန် (ဥက္ကဌ၊ မောရ၀တီ ဘောလုံးအသင်း) ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ဦးလှမျိုး (အောင်မြင်သူ ကုမ္ပဏီအုပ်စု) ကျပ်သိန်း ၂၀၀ ဦးကျော်ဟိန်း (ချယ်ဟိန်း ကုမ္ပဏီ) ကျပ်သိန်း ၂၀၀ Fresh Air Con ကျပ်သိန်း ၁၀၀ လူငယ်မီဒီယာသမားများ ကိုယ်စားပြု ကျပ်သိန်း ၅၀ Eleven Media Group ကျပ်သိန်း ၂၀ ပေါ်ပြူလာ ဂျာနယ် ကျပ်သိန်း ၂၀ သရုပ်ဆောင် ပြေတီဦး ကျပ်သိန်း ၂၀ ဒါရိုက်တာ ၀ိုင်း ကျပ် ၁၅ သိန်း အလှူပစ္စည်းနှင့် ငွေသား စုစုပေါင်း ကျပ် သိန်း ၅၀၀၀ ခန့်ကို ပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဦးဇော်ဇော်မှ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများသို့ ထပ်ဆောင်း အလှူငွေ ကျပ်သိန်း ၁၅၀၀ခန့် ကို ထပ်မံပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ Like · · Share · 17 hours ago · Thet Chit Swe, Thiri Zaw, Kotoke Gyi and 690 others like this. 251 shares Writeacomment... Eleven Media Group တိမ်းရှောင်လာသော ရိုဟင်ဂျာများကို လက်ခံရန် UNHCR၏ တောင်းဆိုချက်ကို ဘင်္ဂလားဒေရှ် အစိုးရ ပယ်ချ ဘင်္ဂလားဒေရ်ှနိုင်ငံဖက်သို့ တိမ်းရှောင်လာသော ရိုဟင်ဂျာများကို လက်ခံထားရန် ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး (UNHCR) ၏ တောင်ဆိုချက်အား ဘင်္ဂလားဒေရှ် အစိုးရက ပယ်ချလိုက်ကြောင်း သိရသည်။ ဘင်္ဂလားဒေရှ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဒီပူမွန်နီက မြို့တော် ဒါကာတွင် ဇွန်လ ၁၂ ရက်နေ့က သတင်းထောက်များကို ပြောကြားရာတွင် "နေ...See More http://goo.gl/oHJqT news-eleven.com http://goo.gl/oHJqT Like · · Share · 18 hours ago · Kyaw Aye, Unionof Burma, Nay Zaw and 501 others like this. 328 shares Writeacomment... Eleven Media Group ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း အခွန်အများဆုံး ထမ်းဆောင်ထားသည့် အခွန်ထမ်း ၁၀၀ ဦးစာရင်း ထုတ်ပြန် နာမည်ကျော် ကုမ္ပဏီကြီးအချို့နှင့် ၁၀၀ ဦးစာရင်းတွင် ပါဝင်သင့်သည့် ကုမ္ပဏီများပါဝင်လာမှု မရှိ http://goo.gl/nkor4 news-eleven.com ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း အခွန်အများဆုံး ထမ်းဆောင်ထားသည့် အခွန်ထမ်း ၁၀၀ ဦးစာရင်း ထုတ်ပြန် နာမည်ကျော် ကုမ္ပဏီကြီးအချို့နှင့် ၁၀၀ ဦးစာရင်းတွင် ပါဝင်သင့်သည့် ကုမ္ပဏီများပါဝင်လာမှု မရှိ အဖွဲ့နှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေသော ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှုးချုပ်၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် ဗီဂျေးနမ်ဗီယာသည် ဇွန်လ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့သို့ ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ စစ်တွေမြို့တွင် ထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်သော ပုဒ်မ ၁၄၄ နှင့် ပတ်သက်၍ ယနေ့နံနက်၌ ထပ်မံအသိပေးကြေညာနေမှုကြောင့် ယခင်နေ့များကကဲ့သို့ တုတ်၊ ဓား လက်နက်များ ကိုင်ဆောင်ကာ လူစုလူဝေးဖြင့် သွားလာမှုများ နည်းပါးသွားကြောင်း သိရသည်။ Like · · Share · 19 hours ago · Mg's Chitlay, Yee Mon, Unionof Burma and 219 others like this. 62 shares Writeacomment... Eleven Media Group shared their own album: ၄၉ အစိမ်းဒိုင်နာ ခရီးသည်တင်ယာဉ် တိမ်းမှောက်မှု. ၄၉ အစိမ်းဒိုင်နာ ခရီးသည်တင်ယာဉ် တိမ်းမှောက်မှု သာကေတမှ မြောက်ဒဂုံသို့ ပြေးဆွဲနေသော ၄၉ အစိမ်း ဒိုင်နာ ခရီးသည်တင်ယာဉ်သည် သာကေတမြို့နယ်ရှိ တပ်ဖွဲ့မှတ်တိုင်နှင့် (၁) ဈေးကွေ့ကြားတွင် ဆိုက်ကားကို တိမ်းရှောင်ရာမှ ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှု ဇွန်လ ၁၃ ရက်နေ့ နံနက် ၉ နာရီ မိနစ် ၅၀ ခန့်က ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ယာဉ်ပေါ်ပါ ခရီးသည် ၁၁ ဦးခန့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ကြောင်းနှင့် ၎င်းတို့အား သင်္ဃန်းကျွန်းစံပြဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်တွင် ယာဉ်မောင်းနှင့် ယာဉ်နောက်လိုက်တို့မှာ ယာဉ်ကို ထားပြီး ထွက်ပြေးသွားကြောင်း သိရသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ယခုဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည့် ပြသနာများကို ကော်မတီများဖွဲ့စည်း၍ ရေရှည်ဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ၊ ဖြစ်ပွားနေသည့် ပြသနာများကို ပိုမိုကြီးထွားအောင် နောက်ကွယ်မှ လှုံ့ဆော်နေသူများ၊ ထောက်ပံ့နေသူများ ရှိနေသဖြင့် အဆိုပါ လှုံ့ဆော်ထောက်ပံ့နေသည်ဟု ယူဆရသူများကို စစ်ဆေးလျက်ရှိပြီး လက်ဦးမှုရယူရန်အတွက်လည်း စစ်ဆေးဖော်ထုတ်သွားမည် ဖြစ်ပြီး အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်မှ အကြီးတန်း အရာရှိကြီးတစ်ဦးက Eleven Media Group ၏ မေးမြန်းမှုကို ဇွန်လ ၁၃ ရက် နံနက် ၁၀နာရီ ၁၅ မိနစ်ခန့်က ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့သည်။
Peace Donor Support Group အဖွဲ့နှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေသော ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှုးချုပ်၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် ဗီဂျေးနမ်ဗီယာသည် ဇွန်လ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့သို့ ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း လတ်တလော ရုန်းရင်းဆန်ခတ် ဖြစ်ပွားမှုများကြောင့် ဇွန်လ ၈ ရက်မှ ၁၁ ရက်အတွင်း လူနေအိမ် ၁၆၆၂ လုံး မီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်း၊ လူ ၂၁ ဦး သေဆုံးပြီး ၂၁ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းနှင့် ဆိုင်ကယ် ၁၈ စီး၊ ဆိုင်ခန်းခြောက်ခန်း၊ ထော်လာဂျီ သုံးစီး၊ စက်ဘီး ကိုးစီး ပျက်စီးခဲ့ကြောင်း ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ၀က်ဘ်ဆိုက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ရိုဟင်ဂျာ များ အပေါ် ဒီအေဘီ သဘောထား များချမှတ်ခဲ့ စဉ်က ( မိုးသီးဇွန် )
ရိုဟင်ဂျာ ပြသနာဟာ ကျနော်တို့တပ်ပေါင်းစုတွင် တာဝန်ယူခဲ့ရစဉ် အနှစ်ပေါင်း ၁၄ နစ်နီးပါး
ခေါင်းကိုက်ခဲ့ရသောပြသနာဖြစ်ပါတယ်။ တဖက်မှာ ကိုယ်ပြည်တွင်းအင်အားစုများ ( Local) နှင့်ရင်ဆိုင်ရတယ်။ တဖက်မှာ နိင်ငံတကာ ( International)နှင့်ရင်ဆိုင် ကြရပါတယ်။ ဦးနုလည်း
ဒီလိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပုံရပါတယ်။ နိင်ငံတကာမှာလဲ အလားတူပြသနာတွေရှိနေကြပါတယ်။
ငါဒို့ အမျိုးဘာသာသာနာဟု အော်တတ်ရုံနဲ့ဒီကိစ္စ ကို ဖြေရှင်းဖို့ လုံလောက်တဲ့ အချက်အလက်
များမဟုတ်ပါ။ သွေးရူးသွေးတန်း အော်နေရုံနဲ့ မပြီးတဲ့ပြသနာဖြစ်ပါတယ်။
၁၉ ၈၉ ကနေ ၁၉ ၉ ၃ လောက်အထိ ကျနော် ဒီမိုကရေစီမဟာမိတ်အဖွဲ့ ချုပ် ( မဒမခ) အင်္ဂလိပ်လို ဒီအေဘီမှာ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှုတာဝန်ယူခဲ့ရတယ်။ ကေအင်ယူအပါအ၀င် တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ ပေါင်းစုံ ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ဦးခေမာစာရဦးဆောင်တဲ့ မြန်မာနိင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ရဟန်ပျိုသမဂ္ဂ နဲ့အေဘီအက်စ်ဒီအက်ဖ် တို့ လဲပါတယ်။ ဥက္တဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောဘိုမြ၊ ဒုဥက္ကဌ တွေက
နိင်ရွှေကျင် ( မွန်ပြည်သစ်) နဲ့ဦးဘရန်ဆိုင်း တို့ ဖြစ်ကြတယ်။ အထွေထွေအတွင်းရေးမှုးက
ဒီအချိန်မှာ ရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့ က လာပြီး ဒီအေဘီမှာအဖွဲ့ ဝင်အဖြစ်လျောက်လွာတင်ခဲ့ပါတယ်။
ဘုံရန်သူ စစ်အစိုးရကို စစ်ရေး၊ သံတမန်ရေးနဲ့ လူထုတိုက်ပွဲတွေနဲ့ဝင်နေချိန်မှာ လူတန်းစားပေါင်းစုံ၊ ဘာသာပေါင်းစုံ နဲ့လူမျိုးပေါင်းစုံကိုလက်တွဲ တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့ပေါ်လစီ
ကြောင့်သူတို့ကိုအဖွဲ့ ဝင်အဖြစ်အသိမှတ်ပြုဖို့လျောက်လွှာတင်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ သူတို့ ကို ကျနော်တို့ မနပုလောဌာနချုပ်မှာလက်ခံပြီး စကားပြောရပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ သူတို့ က သူတို ကိုယ်သူတို့မြန်မာနိင်ငံထဲက တိုင်းရင်းသား တမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့
အချက်က ကျနော်တို့ ထဲမှာ အငြင်းပွားစရာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒီအေဘီအလုပ်အမှုဆောင် တွေက တညီတညွတ်တည်းနဲ့ သူတို့ ကို လက်မခံနိင်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါနဲ့ သူတို့ ဒီအေဘီမှာ မပါဝင်နိင်တော့ပဲဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒီအေဘီအလုပ်အမှုဆောင်တွေက ရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်
တခြားဘာသာဝင်များ ကဲ့သို့မြန်မာနိင်ငံသားဖြစ်ပိုင်ခွင့် ရှိပါကြောင်း စစ်အုပ်စုရဲ့ရိုဟင်ဂျာ များအပေါ် လူအခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှု များကို ကျနော်တို့ လက်မခံပါကြောင်း အကြောင်းပြန်
ခဲ့ပါတယ်။ နေစရာမြေမရှိ ဖြစ်နေတဲ့ သူတို့ လူမျိုးများ ဘ၀ကိုစာနာကြောင်း ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဌာနေတိုင်းရင်းသား မှာရခိုင်လူမျိုးဟုသာအသိမှတ်ပြုခဲ့ပါတယ်။
၁- ဗိုလ်ချုပ်မြ ( ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး)
၂- နိင်ရွှေကျင် (မွန်ပြည်သစ်ပါတီ)
၃- ဦးဘရန်ဆိုင်း (ကချင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအစည်းအရုံး )
၄- ဦး သွင် ( ပြည်သူပြည်ချစ်ပါတီ)
၅- ဦးတင်မောင်ဝင် ( စီအာဒီပီ)
၆- မိုးသီးဇွန် ( အေဘီအက်စ်ဒီအက်ဖ်)
၈- ဒေါက်တာမာတာ ( ကရင်)
၉ - ဒေါက်တာတူးဂျာ ( ကချင်)
၁၀- ခိုင်ထွန်းစိန် ( အေအဲလ်ပီ)
၁၁- ဦးရဲကျော်သူ ( စီအာဒီပီ)
၁၂ -ဦး အေးဆောင် (
၁၃ - ဖဒိုမန်းရှာ (ကရင်)
(အမှုဆောင်နာမည်များကို ပြန်လည်စီစစ်ရန်လိုပါတယ်။ )
ထိုစဉ်က ဒီအေဘီအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ ဆွေးနွေးချက်များကို မှတ်မိသလောက်ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင် တော့
၁- လူမျိုးတမျိုးကိုတိုင်းရင်းသားအဖြစ် လက်ခံမယ်လက်မခံဘူးဆိုတာ နိင်ငံရေး ပါတီများ ခေါင်းဆောင်များ ၊ အဖွဲ့ များ၊ အုပ်စုခေါင်းဆောင်များ၊ ပညာရှင်တဦးတယောက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက် ချလို့ မသင့်တော်ပါ။ချပိုင်ခွင့်လည်းမရှိပါ။
၂- ကျွမ်းကျင်သော ပညာရှင်များ သမိုင်း၊ယျဉ်ကျေးမှု၊ မနသဗေဒ နှင့် ( DNA ) ကဲ့သို့သော်မျိုးရိုးဗီဇ ဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှုများ ကျွမ်းကျင်သူ ပညာရှင် များ လိုအပ်ပါတယ်။
၃- ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများကို လူမျိုးအဖြစ်အသိမှတ်ပြုခံရခြင်း မခံရခြင်းကို နိင်ငံတော်ရဲ့ အမြင့်ဆုံး ပါလီမန် များတွင်သာ ဆုံးဖြတ်နိင်ခွင့်ရှိပါတယ်။
၄- ရိုဟင်ဂျာများက သူတို ဖါသာသူတို့တိုင်းရင်းသားအဖြစ် သတ်မှတ်နေခြင်း ကိုတော့ ကျနော်တို့မပြောနဲ့ လို့ပြောကြားပိုင်ခွင့်မရှိပါ။
မှတ်ချက် - ကျနော် ရဲ့မူမှာလဲ ဒီအေဘီရဲ့ မူအတိုင်းသာဖြစ်ပါကြောင်း ဖေါ်ပြလုိုက်ပါတယ်။
မိုးသီးဇွန် Moethee Zun
လူပြော မသန် ၊ လူသန် မပြော
အခုတလော ကြံ့ဖွတ်တွေ တင်ထားတဲ့ ဗီဒီယို ကလစ်ကိုကြည့်ပြီး ကျနော့်ကို စိုးရိမ်စိတ်နဲ့မိတ်ဆွေတွေက မေးကြ၊ တယ်လီဖုန်းကိုခေါ်နဲ့အလုပ်တော်တော်များသပေါ့လေ။ ကျနော်အတွက် စိုးရိမ် စိတ်နဲ့ မေးမြန်းလာတဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေ တွေကို ကျေးဇူးတင် ကြောင်း ပြောချင်ပါရဲ့။
ဒီဗွီဒီယိုက ၂၀၀၇ ခုနစ် သံဃအရေးတော်ပုံကြီး ကို စစ်အုပ်စုက သတ်ဖြတ်နိမ်နင်းခဲ့တဲ့အတွက် တပြည်လုံး နာကျည်း ခဲ့ကြတာကိုမှတ်မိကြဦးမယ်ထင်ပါတယ်။
ဒီလှုပ်ရှားမှုဖြစ်လာတဲ့အတွက် မစိုးရိမ်ဆရာတော်ကြီး ကို ကျနော်လျောက်ထားပြီး စစ်အုပ်စုဆန်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ဖို့နိင်ငံတကာ လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့တယ်။ ပီနန်ဆရာတော်ကြီးက
ခေါ်ယူတဲ့အတွက် ကျနော်မလေးရှားကိုလည်းသွားခဲ့တယ်။ မလေးရှားက မြန်မာအလုပ်သမားတွေ၊ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ရိုဟင်ဂျာ အဖွဲ့ တွေ အားလုံး
ကျနော်မူကတော့ စစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့ဘုံရန်သူကြံ့ဖွတ် အမျိုးဘာသာသာသနာရဲ့ ရန်သူလို့ သတ်မှတ်ထားတာပါ။ ဘုံရန်သူကို တိုက်ဖျက်ဖို့ အတွက အားလုံးနဲ့လက်တွဲဆောင်ရွက်နေသူဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်တွင်း လှုပ်ရှားမှုနဲ့ ပြည်ပလှုပ်၇ှားမှုကို အရှိန်မြင့် ခဲ့ကြတယ်။ သိသာတဲ့ ပြည်ပလှုပ်ရှားမှုကတော့ စစ်အုပ်စုခေါင်းဆောင်တွေကို စီးပွားရေးအရ ဒဏ်ခတ်တဲ့ ဥပဒေကို အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက ချမှတ်နိင်ခဲ့တယ်။
စီးပွားရေးပိတ်စို့ မှုတွေထဲမှာ ၂၀၀၇ က ၀ရိဇိန် လက်နက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဥပဒေစစ်ခေါင်းဆောင်တွေ ဟာ နိင်ငံတကာ လှည့်ရင် ခရက်တစ်ကဒ်နဲ့သုံးလို့မရပဲ လူတောမတိုးနိင်တဲ့ဘ၀ကိုရောက်အောင်လုပ်ဆောင်နိင်ခဲ့တဲ့ဥပဒေပါ။ ခုထိကို ခေါင်းမဖေါ်နိင်သေး တဲ့အတွက် အလွန်အားရပီတီဖြစ် စရာပေါ့။
လက်နက်ကိုင်လှုပ်ရှားမှုတွေအတွက်လည်း အားပေးကူညီခဲ့နိင်ပါတယ်။ ဒီဗီဒီယိုကလစ်ကလေးကို ကြံဖွတ် တွေ အပြည့်သူတို့ မတင်ရဲ ပါဘူး။ဒီတော့ဖြတ်ညပ်ကပ်လုပ်ပြီး အောက်ကလိအာလုပ်နေတာပါ။
ကေသရာဇခြေင်္သေ့မင်းတို့ မည်သည် တောခွေးအ တွေ ဟောင်တိုင်းလိုက်မဟောင်ကြပါဘူး။
လူပြောမသန်၊ လူသန် မပြော ဆိုသလိုပေါ့။ ဒါကြောင့်ငြိမ်နေတာပါ။
လုပ်စရာရှိတာကို ဆက်လုပ်နေပါတယ်။ ကြံဖွတ်တွေရဲ့ ခြေလှမ်းကို
မျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်နေတယ်။ ကိုယ့်ဇာတ်ကို ကိုယ်နိင်အောင်က
မနိင်လို့ ကတော့ အမေလေးအဘလေးမတနဲ့ လို့ ကြိုတင်သတိပေး
ကြံဖွတ်တွေကိုပဲ လ်ိမ်လို့ ရမယ်။ ဖေစ်ဘုတ်ပေါ်က အောက်ကလီ အာတွေ
ပိုးထိုး လောက်ကိုက်တွေကို ကြည့်ပြီး ငါဒို့ အောက်မှာ တမျိုးသားလုံး
စည်းလုံးမိပြီလုို့ပိုတွက်မိရင်တော့ နှခေါင်းကို ကျည်ပွေ့ နဲ့ တွေ့ မနော်။
ဖေါက်ပြန်တဲ့ ကြံဖွတ်အုပ်စု ကျဆုံးရမည်။
ကိုအောင်တင်NLD(LA)Canadaသည်မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားနေသူတဦး ဖြစ်သည်။သူ၏သုံးသပ်ချက်များကိုတင်ဆက်လိုက်ပါသည်။ ရဲရင့်ငယ်ဘက်ပြောင်းတယ်မထင်ပါနဲ့၊ တိုင်းရင်းသားဖြစ်ချင်တာတခုပဲကန့်ကွက်တာပါ၊ Stateless ကိုလက်ခံနိုင်တာမြန်မာကမ္ဘာမှာဘယ်လောက်ဂုဏ်တက်တယ်မှတ်လဲ.. (အကုန်လုံးနှင်ထုတ်လို့မရလို့ပါ)
ဟိုးစစ်တကောင်းကနေဦးသန်းရွှေအထိအထုတ်ရှုပ်ကိုဦးသိန်းစိန်တယောက်ထဲ မနိုင်ရင်အမေစုကိုတရားဝင်အကူအညီတောင်းပါ၊ အဲ့ဒါ ရဲရင့်ငယ်ရဲ့ ဆေးခါးကြီးပဲ။
အောက်က စာပိုဒ်နှစ်ပိုဒ်နှင့် လက်ခုပ်သံတွေကို ဖတ်ကြည့်ပါ။ တစ်ခုခုတော့ မှားနေပြီလို့ မထင်ဘူးလားဗျာ။
ရခိုင်ပြည်နယ် ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စနှင့် ကျနော်တို့ ရှင်းလင်းတဲ့နေရာမှာ ကျနော်တို့ရဲ့ ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အနောက်တံခါး ကျိုးပြီလို့ ကျနော်က ပြောချင်ပါတယ်။
ဖြောင်း ဖြောင်း ဖြောင်း ဖြောင်း ဖြောင်း
ရခိုင်အမျိုးသားတွေ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေတဲ့ အနောက်တံခါးကြီး ကျိုးပြီ။ ကျနော်တို့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများဖြစ်တဲ့ မြို၊ ကမီး၊ သက်တွေ စောင့်ရှောက်နေတဲ့ နေထိုင်နေတဲ့ အနောက်တံခါးကြီး ကျိုးသွားပါပြီ ခင်ဗျ။
တစ်ခုခု မှားနေပြီလို့ မထင်သေးရင် အောက်မှာ ဥပမာ သုံးခုကို ဆက်ဖတ်စေချင်ပါတယ်။
၁။ ကျနော်တို့ အမိမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီး ထီးကျိုး စည်ပေါက် ကျွန်သဘောက်ဘဝ ရောက်ခဲ့ရတယ်။
၂။ ကျုပ်တို့ မွန်နိုင်ငံတော်ကြီး ပျက်သုဉ်းခဲ့ရတယ်။
၃။ ငါတို့ အဖရခိုင်နိုင်ငံတော်ကြီး ကျဆုံးခဲ့ရတယ်။
ဒါတွေကတော့ လက်ခုပ်တီးစရာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ရှင်းလှပါတယ်။
တစ်ကယ်တော့ အနောက်တံခါးကြီး ကျိုးသွားပါပြီလို့ ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့က ဦးလှမြင့်က ၂၀၁၂ခု ဇွန်လ(၁၁)ရက်နေ့တွင် ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ရွှေဂုံတိုင် ဒို့ရိုးရာစားသောက်ဆိုင်မှာ ကြီးမှူးကျင်းပသော လက်ရှိရခိုင်ပြည်အခြေအနေ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောကြားလိုက်တဲ့အခါမှာ တက်ရောက်တဲ့ ပရိသတ်က ဝမ်းနည်း ကြေကွဲကြသင့်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် တံခါးကြီးကျိုးသွားတာကို ပရိသတ်က လက်ခုပ်သြဘာ ပေးနေကြတာလဲ။ အထူးသဖြင့် ရခိုင်ရွာတွေ မီးရှို့ခံ၊ ရခိုင်တွေ အသတ်ဖြတ်ခံ၊ အနိုင်ကျင့်ခံ၊ ရခိုင်တွေ သောင်းနှင့်ချီ ဒုက္ခသည်အဖြစ် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေမှာ ခိုလှုံဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေပြီး ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပက အလှူငွေများ ကောက်ခံထောက်ပံ့နေရတဲ့ အခါမျိုးမှာ တံခါးကြီး ကျိုးသွားတာကို လက်ခုပ်သံ တစ်ဖြောင်းဖြောင်းနှင့် ကြိုဆိုလိုက်တာက တစ်ခုခုတော့ မှားနေပြီလို့ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြသော ဦးအေးသာအောင်၊ ဦးခွန်ထွန်းဦး၊ ဦးကိုကိုကြီးအပါအဝင် တက်ရောက်ကြတဲ့ ခေါင်းဆောင်ကြီးများ မထင်မိကြဘူးလားဗျာလို့ မေးလိုက်ချင်ပါတယ်။
ရှင်းရှင်းပြောရရင် အခု ရခိုင်ပြည်မှာ ဘင်္ဂါလီတွေ အစုလိုက် အပြုံလိုက် ခိုးဝင်နေတာကြောင့် တားဆီးရင်းဖြစ်ရတာပါဆိုတဲ့ ဥပဒေမဲ့ အဓိကရုဏ်းတွေကို လုံးဝ ဘဝင်မကျပါ။ GDP ဘီလျှံတစ်ရာကျော်ရှိပြီး မြန်မာပြည်ထက် အပုံကြီး ပိုတည်ငြိမ်တဲ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဘင်္ဂလားဒက်ရ်ှက ဘင်္ဂါလီတွေက GDP ဘီလျှံငါးဆယ်ကျော်သာရှိပြီး ပြည်တွင်းစစ်တွေအပြင် မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေဆဲဖြစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို ပေါ်တာဆွဲခံ၊ အရိုက်ခံ၊ အဆဲအနှိမ်ခံဖို့၊ သူ့သမီး၊ သူ့မယား အနိုင်ကျင့်ခံရဖို့ ခိုးဝင်လာနေကြတယ်ဆိုတာက သဘာဝ ကျပါရဲ့လား။
အရင်ကာလကတည်းက တရားမဝင် ဝင်နေခဲ့တဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေရှိရင် စိစစ်အရေးယူပြီး ပြန်မောင်းထုတ်လိုက်ပါ။ အခုဝင်လာနေတာရှိရင်လည်း တားဆီးပါ။ ဖမ်းပါ။ မောင်းထုတ်ပါ။ နောင်ဝင်လာမှာကိုလည်း အခုတည်းက ကြိုတင်စီစဉ် ကာကွယ်ပါ။ မြန်မာပြည်မှာ မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေအပြင် ဘယ်နိုင်ငံခြားသားမှ လွှမ်းမိုးလာမှာကို ကျနော်တို့လည်း မကြိုက်တာမို့ အနောက်ဖက်တံခါးကြီးကို ကာကွယ်နေတဲ့ ရခိုင်အမျိုးသားများကို အလေးအမြတ်ပြုပါတယ်။ ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ ကျနော်တို့ မြန်မာမွတ်စလင်များက အချိန်မရွေး အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။ သို့သော် ဘင်္ဂလားဒက်ရှ် ဒုက္ခသည်စခန်းမှာရှိတဲ့ ရခိုင်ပြည်က မွတ်စလင်တွေတောင် ကိုယ့်ရပ်မြေဖြစ်တဲ့ မြန်မာပြည်ကို လုံခြုံမှုမရှိလို့ မပြန်ရဲပါဘူးဆိုပြီး UNHCRနှင့် ဘင်္ဂလားဒက်အစိုးရကို အာခံငြင်းဆန်နေတဲ့ အချိန်မျိုးမှာ ဘင်္ဂလာဒက်ရ်ှနိုင်ငံသား ဘင်္ဂါလီတွေက ပေါ်တာအဆွဲခံဖို့ မြန်မာပြည်ထဲ အစုလိုက် အပြုံလိုက် တရားမဝင် ခိုးဝင်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ အခြေအမြစ်မရှိတဲ့ စွပ်စွဲချက်ကို အကာအကွယ်(Pretext)ယူပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် လက်ရှိ တရားဝင်နေထိုင်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား မွတ်စလင်တွေကို မျိုးဖြုတ်ဖို့ အကွက်ဆင်လာခြင်း ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ . . . .
ဦးအေးသာအောင်၊ ဦးခွန်ထွန်းဦး၊ ဦးကိုကိုကြီး၊ ဦလှမြင့်၊ ဦးကျော်မြင့်တို့ ခင်ဗျာ။ တစ်ခုခုတော့ အကြီးအကျယ် လွဲနေပါပြီ။
မေလ (၂၈)ရက် မသီတာထွေးကို ဘင်္ဂါလီ မွတ်စလင် သုံးယောက်က မုဒိန်းကျင့် သတ်တဲ့ နောက်နေ့ (၂၉)ရက်မှာ နစကက အရာရှိက မောင်းတောမှာ မွတ်စလင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို မုဒိန်းကျင့်မှု ဖြစ်ပွါးခဲ့တယ်။ သွားတိုင်တာတောင် အရေးယူဟန် မတူပါဘူး။ ဘယ်မီဒီယာကမှလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာ နစကက မွတ်စလင်အမျိုးသမီးကို မုဒိန်းကျင့်တယ်လို့ မဖေါ်ပြပါဘူး။ ဂျာမဏီမှာ တစ်ချိန်က ဂျူးတွေကို တိရစ္ဆာန်လို သဘောထားသလို သဘောထားနေကြပြီ တူပါတယ်။ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကို လူမျိုး မရွေး၊ ဘာသာ မရွေး ဥပဒေအရ ထိရောက်စွာ အရေးယူရမှာပါ။ လူမျိုးရေး အဓိကရုဏ်းတွေဖြစ်အောင် ဖန်တီးသူများကို ဘယ်လူမျိုးဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်သူဘဲဖြစ်ဖြစ် ထိရောက်စွာ အရေးယူရပါမယ်။
မြန်မာပြည်မှာ တိုင်းရင်းသား (၁၄၄)မျိုးလို့ သတ်မှတ်ခဲ့ဘူးတယ်။ နောက် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စောမောင်က သူဖြုတ်ချင်တာ ဖြုတ်ပြီး ဒီမိုကရေစီ အစိုးရအဆက်ဆက်နှင့် မဆလ(၂၆)နှစ်လုံးလုံး နိုင်ငံခြားသားတွေလို့ဆိုခဲ့တဲ့ ကိုးကန့်တရုပ်တွေကို တိုင်းရင်းသားဖြစ်စေသတည်းဆိုပြီး တိုင်းရင်းသား (၁၃၅)မျိုး သတ်မှတ်လိုက်တယ်။ အခု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ဇိုမီးအပါအဝင် ဖြုတ်ချင်တာ ဖြုတ်ပြီး တိုင်းရင်းသား (၁၀၁)မျိုး ဖြစ်စေသတည်း လုပ်ပြန်တယ်။ ဇိုမီးတွေက ကန့်ကွက်တော့ တိုင်းရင်းသား (၁၀၂)မျိုး ဖြစ်စေသတည်းဆိုပြီး ဇိုမီးကို ပြန်ထည့်ပြန်တယ်။ နောက်ကန့်ကွက်သူတွေ ပေါ်လာရင်လည်း ပေါ်လာသလို ထပ်ပြင်အုံးမဲ့သဘော ဖြစ်နေတယ်။ ဘယ်မှာလဲ မူ။ ရှက်ရမှန်းလည်း သိကြဟန် မတူဘူး။
တိုင်းရင်းသား သတ်မှတ်မှုတွေ မှန်သမျှကို အစိုးရတွေကသာ မိမိသဘောနှင့် တစ်ဖက်သတ် ထင်သလို သတ်မှတ်ခဲ့တာချည်းဖြစ်ပြီး ပြည်သူလူထု၏ သဘောထား တောင်းခံမှု တစ်ခါဘူးမှ မရှိခဲ့ဘူး။ ဒါကြောင့် အင်မတန်နည်းတဲ့ လူနည်းစုဖြစ်တဲ့ ချင်းအမျိုးသား တစ်မျိုးထဲကို လူမျိုးကွဲ ငါးဆယ်ကျော်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ ရိုဟင်ဂျာ တိုင်းရင်းသားဖြစ် မဖြစ် ကျနော်တို့ မြန်မာမွတ်စလင်တွေရဲ့ သဘောထားက ရခိုင်အပါအဝင် တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ၏ သဘောထားနှင့် ထပ်တူဘဲ ဖြစ်တယ်။ သို့သော် အစိုးရလုပ်သူက သူထင်သလို တိုင်းရင်းသား ဖြစ်စေဆို ဖြစ်လိုက်၊ ပယ်စေဆို ပယ်လိုက်ဆိုတာမျိုး မဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါဟာ အမျိုးသားရေး၊ တိုင်းပြည် အချုပ်အခြာ၊ လုံခြုံရေး၊ တိုင်းပြည်အနာဂတ်နှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နေတာမို့ သမိုင်းပညာရှင်များ၊ နိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်များအပါအဝင် တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ ပြည်သူလူထုရဲ့ ညှိနှိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်အရသာ ဖြစ်သင့်တယ်။ အထူးသဖြင့် စစ်အာဏာရှင် (သို့မဟုတ်) စစ်အာဏာရှင်တစ်ပိုင်း အစိုးရများက ဖြစ်စေ၊ ပယ်စေဆိုတိုင်း ဖြစ်လိုက်၊ ပယ်လိုက် မဖြစ်သင့်ဘူး။
တစ်ဖန် လူမျိုး (၁၀၁)မျိုးလို့ ဘာလို့ သတ်မှတ်ရတာလည်းဆိုတာကို ဆန်းစစ်ဖို့လိုပြန်ပါတယ်။ (၁၀၁)ပါးသော ထီးဆောင်းမင်းတို့က ပဏ္ဍာကြို့ရတဲ့ မဟာသမ္မတမင်း၊ စကြာဝဋေးမင်း လုပ်ချင်လို့ တမင် ပုံစံသွင်းနေတာလားဆိုတာ သံသယဖြစ်စရာပါ။ ဒီလိုစီမံချက်မျိုးနှင့် မဟာလူမျိုးကြီးဝါဒကို အသက်သွင်းဖို့ ရည်ရွယ်ချက်က နောက်ကွယ်မှာရှိနေရင်တော့ ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုနိုင်ငံ တည်ဆောက်ရေးအတွက် အင်မတန်အန္တရာယ်ကြီးပါတယ်။
နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူး ဗိုလ်မှူးဇော်ဦး(မှူးဇော်)က ရိုဟင်ဂျာအကြမ်းဖက်သမားတွေ လက်နက်ကိုင် ကျူးကျော်ဖို့ လာနေပြီလို့ သူ့ဖေ့စ်ဘွတ်ကနေပြီး ဖွလိုက်ပါတယ်။ ဘင်္ဂလားဒက်နှင့် ဒီလောက်ဆက်ဆံရေး ကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာ ဒီသတင်း မှန် မမှန်၊ မှန်ရင်လည်း ဘင်္ဂလားဒက်အစိုးရနှင့် ပူးပေါင်းကိုင်တွယ်ရမည့်အစား မှူးဇော်က လူသားချင်း စာနာမှုတွေ၊ လူ့အခွင့်အရေးတွေ လာမပြောနဲ့လို့ဆိုပြီး လူထုကို တာဝန်မဲ့ သွေးထိုးလှုံ့ဆော်ပေးခဲ့တယ်။ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလို့ ကြွေးကျော်နေတဲ့ သမ္မရုံးက ညွှန်ကြားရေးမှူးဆိုတဲ့ ကြီးမားတဲ့ နိုင်ငံ့ဂုဏ်ဆောင် တာဝန်ကြီးကို ဂရုမထားဘဲ သူ့ကိုယ်သူ မော်စကိုမှာ ကျောင်းတက်နေတဲ့ ကျောင်းသားစစ်ဗိုလ်ကလေးလို ထင်ရာရေးပြီး ကိုယ်လွတ်ရုံးလို့ ရမယ်လို့ ထင်နေဟန်တူတယ်။ ကျနော်တို့ ခေါင်းဆောင်အချို့ကလည်း ပြသနာကို မြင်တဲ့အခါ တစ်ကွက်၊ နှစ်ကွက်၊ အလွန်ဆုံး ငါးကွက်လောက်ဘဲ ကြိုမြင်တတ်သူတွေဖြစ်ပြီး ဆယ်ကွက် အကွက်နှစ်ဆယ်ကို မမြင်တတ်တော့ သူတို့ဆင်တဲ့ အကွက်ထဲဝင်ပြီး သွေးဆူကာ ဆော်ကြ၊ ချကြ၊ သတ်ကြဖြစ်ကုန်တယ်။ ရခိုင်ပြည်သားတွေဖြစ်တဲ့ ရခိုင်နှင့် မွတ်စလင်တွေ အချင်းချင်းချကြတော့ နှစ်ဖက်စလုံး အထိနာကြတဲ့အပြင် ရခိုင်ပြည်ရဲ့ ဂုဏ်သတင်း၊ လုံခြုံရေး၊ စီးပွါးရေး လာရောက်မြှုပ်နှံမှု၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရှေ့အလားအလာတွေကို အကြီးအကျယ် ထိခိုက်စေပါတယ်။
အနှစ်နှစ်ဆယ်ကျော် ငြိမ်းချမ်းခဲ့တဲ့ ကချင်မှာလည်း ဒီမိုကရေစီအစိုးရဆိုသူ တက်လာမှဘဲ တစ်နှစ်ကျော်ကြာ စစ်ဖြစ်နေပြီး ဒုက္ခသည်က သိန်းဂဏန်းတောင် ကျော်ပြီဆိုတော့ တိုင်းပြည်မတည်ငြိမ်အောင်၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ ဆက်မဖြစ်လာအောင် သွေးထိုးလှုံ့ဆော်နေသူများ ရှိနေသလားလို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘန်ကောက် ကမ္ဘာ့စီးပွါးရေးညီလာခံမှာ Reckless Optimism လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဘာကြောင့် သတိပေးခဲ့ပါသလဲ။ နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေကို လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ရုရှား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဗီယက်နမ်အပါအဝင် အာဖရိကနိုင်ငံအများအပြားမှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုရဲ့ အကျိုးအမြတ်ကို လူထုက အရိုးအရင်းတောင် အနိုင်နိုင် စုပ် ဆင်းရဲတွင်း နက်နေဆဲဖြစ်ပြီး၊ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်တဲ့ ဥပဒေတွေကို ဆက်လက်ထားရှိကာ Cronyism လို့ခေါ်တဲ့ လက်တစ်ဆုပ်စာ လူလည်အုပ်စုသစ်တစ်ခုနှင့် အစိုးရဟောင်း၊ စနစ်ဟောင်းကလူတွေ ပူးပေါင်းပြီး ခံစား၊ စံစား၊ ခွစားသွားမှာကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ကြိုမြင်လို့ဖြစ်တယ်။ အခုဆိုရင် ကချင်ကိစ္စ၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စ၊ အလုပ်သမားကိစ္စ၊ လယ်မြေအသိမ်းခံရမှုတွေ၊ မီဒီယာ လွတ်လပ်မှု၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု၊ ဒီမိုကရေစီရေး၊ ကျန်နေသေးတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွတ်မြောက်ရေးစတဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းတွေအကုန် နောက်တန်းကိုရောက်သွားပြီး ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာ မလိုလားအပ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ မာရှယ်လောကိုတောင် လူထုက တောင့်တပေးရတဲ့ ဘဝမျိုးကို ရောက်သွားပါပြီ။ စာရင်းချုပ်ရင် ဒေါ်စုရဲ့ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆု လက်ခံမဲ့ နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်ကိုပါ ထိခိုက်နိုင်တဲ့ ခဲတစ်လုံးနှင့် ငှက်အကောင်နှစ်ဆယ်လောက်ရသွားသလို ကြက်တွေပန်းတော့ ယာလည်းညက်ပြီး ဒိုင်က ပြန်စားမဲ့ ဇာတ်ကွက်ကို ကိုယ်က အလိုတူအလိုပါ ဝင်ကပေးနေသလို ဖြစ်နေပါပြီ။
အခြေအနေတွေ ပြန်တည်ငြိမ်လာပြီဆိုရင် မှူးဇော်အနေနှင့် လက်နက်ကိုင် ရိုဟင်ဂျာအကြမ်းဖက်သမားတွေ အစုလိုက် အပြုံလိုက် ဝင်လာနေပါတယ်ဆိုပြီး လူထုကို လှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့ မိမိစွပ်စွဲချက်ကို မှန်ကန်ကြောင်း သက်သေပြဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ မပြနိုင်ရင် လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းဖြစ်အောင် သွေးထိုးမှုကြောင့် သူကော၊ သူ့ဖေ့စ်ဘွတ်ကော သွေးစွန်းသွားပြီ ဖြစ်တယ်။ သမ္မတရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူးကိုယ်တိုင်က တိုင်းပြည် မတည်ငြိမ်အောင် လှုံ့ဆော်မှုကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို ကိုယ့်တိုင်းသူပြည်သားအချင်းချင်း အပြန်အလှန် မီးရှို့၊ အပြန်အလှန် သတ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်လာအောင် လှုံ့ဆော်ပေးနေတဲ့ နောက်ကွယ်က (Mastermind)အင်အားစုတွေဟာ အသုံးချခံ လက်တွေ့ပြစ်မှု ကျူးလွန်နေသူတွေထက် ပိုအပြစ်ကြီးပါတယ်။
တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာ တိုင်းပြည်ကို လူက အုပ်ချုပ်တာ မဟုတ်ရပါဘူး။ မူက အုပ်ချုပ်ရမှာပါ။ ပါတီစုံဖြစ်တိုင်း ရွေးကောက်ပွဲတွေရှိတိုင်း ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ မဖြစ်လာပါဘူး။ ပါတီစုံ ရွေးကောက်ပွဲတွေ မှန်မှန်ကျင်းပနေတဲ့ အာဏာရှင်နိုင်ငံတွေ ရိုက်သတ်လို့တောင် မကုန်ပါဘူး။ မူ(Principle) ပေါ်မှာ မရပ်ဘဲ လူကြိုက်များရေးကို နေရာအတွက် လျှောက်လုပ်မဲ့သူတွေ များလာရင်တော့ ကျနော်တို့နိုင်ငံဟာ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ ပြည်သူလူထု မျှော်လင့်နေတဲ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ ဖြစ်မလာဘဲ ဒီမိုကရေစီ အရေခြုံထားတဲ့ အာဏာရှင်နိုင်ငံသာ ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
လက်ရှိခေါင်းဆောင်များသည် မူပေါ်မှာ ကြံ့ကြံ့ခံ ရပ်မလား။ လူကြိုက်များတာ လိုက်လုပ်မလားဆိုတာ မိမိဖာသာ မေးခွန်းထုတ်ကြဖို့ လိုပါပြီ။
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ထဌကြီး သူရဦးရွှေမန်းက ကျနော်တို့ထဲမှာ မပြောင်းလဲလိုသူတွေ ရှိနေပါတယ်။ သူတို့အင်အားက အင်မတန် ကြီးပါတယ်လို့ ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီမိုကရေစီ တိုက်ပွဲဝင် ခေါင်းဆောင်များအနေနှင့် မူပေါ်မှာ ကြံ့ကြံ့ခံရပ်ပြီး ဒီမိုကရေစီအုတ်မြစ်ကို အခိုင်အမာ ချမှတ်မလား။ ငါးပွက်ရာ ငါးစာချ၊ လူကြိုက်များ ပေါ်ပြူလာဖြစ်မဲ့လမ်းကို လျှောက်ရင်းနှင့် သဘောထားတင်းမာသူများနှင့် လက်တွဲမိပြီး အာဏာရှင်တစ်ပိုင်း ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတည်ထောင်ပြီး တိုင်းပြည်ကို လမ်းလွှဲ ချောက်ချလိုက်ကြမလားဆိုတာက ယနေ့ ကျနော်တို့အားလုံးအတွက် စိန်ခေါ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ အနာဂတ် လမ်းကြောင်းကို ပုံဖေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအတိုင်းဆို တစ်ခုခုတော့ အကြီးအကျယ် မှားနေပြီ ထင်တယ်ဗျာ။
ဇွန် (၁၂)၊ ၂၀၁၂
မှတ်ချက်။ ။ ဒီစာရေးတဲ့အခါ ခင်ဗျားကို ဘက်ပေါင်းစုံက ဝိုင်းတိုက်ကြမယ်ဆိုပြီး မိတ်ဆွေအချို့က မရေးဖို့ တားတယ်။ ကျနော်လည်း သိပ်ရေးချင်လှလို့တော့ မဟုတ်ဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက “လူကြိုက်များတိုင်း တိုင်းပြည် ချောက်ထဲကျမဲ့လမ်းကို လိုက်မလုပ်နိုင်ဘူး” ဆိုတဲ့ စကားကို ဦးထိပ်ထားပြီး တိုင်းပြည်အတွက်၊ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ ပြည်သူလူထုအတွက် အင်မတန် ရေးသင့်တယ် ထောက်ပြသင့်တယ်လို့ ယုံကြည်လို့ မှားနေတဲ့ လမ်းချောကို မလိုက်ဘဲ ကြမ်းပြီး အန္တရာယ်များနိုင်တဲ့ လမ်းမှန်၊ လမ်းကြမ်းကို ရွေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အချက်အလက်နှင့် ဆင်ခြင်တုန်တရားကို အခြေခံတဲ့ တုန့်ပြန် ဆွေးနွေးမှုများကို ကြိုဆိုပါတယ်။ ကျနော် မရေးတာကို အရေးလုပ်၊ ကျနော် မပြောတာကို အပြောလုပ်ပြီး ရိုင်းပြစွာ ဆွေးနွေးတာမျိုးကိုတော့ မကြိုဆိုပါ။
by Phota Yoke on Wednesday, June 13, 2012 at 2:26am ·
ယခုဆောင်းပါးအား www.photayokeking.org စည်းလုံးခြင်းရဲ့အင်အား ၀က်ဘ်ဆိုဒ်မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။ မူရင်းဆောင်းပါးကို ဖတ်ရှုလိုပါရင် www.photayokeking.org သို့ တက်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
ဆောင်းပါးရှင် - ဗိုလ်မှူးကျော်ကျော်ခိုင် (မြန်မာ့တပ်မတော်မှ ရခိုင်တပ်မတော် အရာရှိဟောင်း တစ်ဦး)
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်းတောမြို့ရှိ ဘင်္ဂလီလူမျိုး အုပ်စုလိုက် တွေ့ရပုံ
ယနေ့မီဒီယာတွေမှာ ဘင်္ဂလီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အချို့ဆောင်းပါးများ၊ သတင်းများဟာ မြန်မာပြည်တိုင်းရင်းသား ပြည်သူလူထုအတွက် အဆိပ်အတောက်တွေ ဖြစ်နေတာ တွေ့ရတဲ့အတွက် တာဝန်သိရင် တာဝန်ရှိတယ်ဆိုသလို ရေးသား တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။ စာရေးသားသူအချို့ဟာ ကမြောက်ကခြောက် မဟုတ်ကြပါဘူး။ နိူင်ငံခြားနေ ပညာတတ်ဆိုသူတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ စာဖတ်ပရိသတ်အချို့ရဲ့ ကွန်မင့်တွေကိုကြည့်တော့ အကျိုးရှိတဲ့စာပေမျိုး၊ ဗဟုသုတများတဲ့စာမျိုးကို များများဖတ်ပုံမျိုး မတွေ့ရသလို ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်နဲ့ ဆင်ခြင်တိုင်းထွာပြီး ယုံကြည်လက်ခံတာမျိုးကိုလည်း ကောင်းစွာ မတွေ့ရပဲ ပညာတတ်တွေ ရေးတာပဲဆိုတဲ့ အသိသက်သက်နဲ့ လုံးထွေးအီးယောင်ဝါးလုပ်ပြီး လက်ခံနေကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါး ခေါင်းစဉ်ကိုရေးတော့ ရင်းနှီးတဲ့ ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေတွေက နိူင်ငံရေးနဲ့ သက်ဆိုင်တာပဲ ရေးပါလို့ ပြောကြပါတယ်။ အမှန်တော့ နိူင်ငံရေးဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကြီးအောက်မှာ နိူင်ငံရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ စစ်ရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမူရေး၊ ဘာသာရေး၊ ပညာရေး၊ ယဉ်ကျေးမူ အစရှိသည်ဖြင့် အကုန်လုံး အကျုးံဝင် ဆက်စပ်နေတာပါ။ တစ်ခုခုမှာ ပြဿနာဝင်နေပြီဆိုရင် နိူင်ငံရေး အုပ်ချုပ်ရေးကိုပဲ ဦးတည်သွားတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တနည်းတဖုံ အကြောင်းအကျိုး ဆက်စပ်နေတာကိုထောက်ပြီး အကြောင်းအရာ ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးကနေ ရေးသားတင်ပြနေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဖြတ်ကျော်ကာ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းသို့ပင် တရားမ၀င် ခိုးကူးဝင်ရောက်တဲ့ ဘင်္ဂလီများကို ထိုင်းရဲများမှ ဖမ်းဆီးထားပုံ
ယခုလတ်တလော အကြောင်းအရာတစ်ခုကို ကြားထိုးတင်ပြချင်ပါတယ်။ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတို့ နယ်မြေမှာ ရခိုင်နဲ့ဘင်္ဂလီတွေအကြား ပြဿနာတွေ ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ ဒါဟာ အကြောင်းရှိလို့ အကျိုးဖြစ်လာတဲ့ အကြောင်းအကျိုး ဆက်နွယ်မှု (causes and affects) တစ်ခုပါ။ ပြန်ခွဲရင် လတ်တလောအကြောင်းရင်း (immediate causes) နဲ့ နောက်ခံအကြောင်းတရားများ (root causes) ဆိုတာကို တွေ့ကြရမှာပါ။ မီဒီယာတွေမှာ အီးယောင်ဝါး ရေးနေကြတာမျိုး ဗိုလ်ကျော်ဆန်းနဲ့ ဦးအောင်သောင်းတို့လို လူဆိုးလူကြမ်းတွေနဲ့ မပတ်သက်သလို အစိုးရရဲ့ နိူင်ငံရေးအာရုံပြောင်းဖို့ လှည့်ကွက် လုံးဝမပါပါဘူး။ အခြေခံက ရခိုင်တိုင်းရင်းသူတစ်ဦးကို မုဒိမ်းကျင့် လူသတ်တဲ့ကိစ္စကနေ ပြဿနာစလာတာကိုပဲ စံနစ်တကျ အဖွဲ့တစ်ခုက ဖန်တီးနေတာလိုလို အာအက်ဖ်အေရဲ့ လေသံတွေ၊ တရုတ်ဗမာ အဓိကရုဏ်းမျိုး ဖေါ်ပြပြီး သက်သေထူနေတဲ့သူတွေ၊ အိညက်ညက် နိူင်ငံရေးလေသံမျိုးနဲ့ ပြတ်ပြတ်သားသား သဘောထားကို မပြောရဲသလိုလိုလူတွေ၊ လူသားချင်း စာနာထောက်ထားသလိုလို လူ့အခွင့်အရေးကိုပဲ အရမ်းလေးစားသူတွေလိုလို ငြိမ်းချမ်းရေး လိုလားနေသူတွေလိုလို စတဲ့လိုလိုသမားတွေ တတ်ယောင်ကားတွေလည်း အများကြီး ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။
မသီတာထွေးအား မုဒိန်းကျင့် သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြသော တရားခံ ဘင်္ဂလီ (၃) ဦးကို ရုံးထုတ်လာပုံ
တချိန်က လှေစီးပြီး စီးပွားရေးသွားလုပ်ဖို့ ဘင်္ဂလားကနေထွက်ခွာရင်း ထိုင်းရေတပ်က ဖမ်းမိတော့ ရိုဟင်ဂျာကို လူသားချင်းစာနာပါဆိုတဲ့ နိူင်ငံရေးသမားလိုလို ဆောင်းပါးသမားလိုလို နိူင်ငံခြားနေ အချို့သော အမျိုးသား အမျိုးသမီးတွေ (မြန်မာစစ်စစ်တော့ ဟုတ်ဟန်မတူပါ) လည်း ရှိကြပါသေးတယ်။ ၁၉၉၀ ခုလောက်ကဆိုရင် နဝတကို ဆဲဖို့လောက်သာတွေးနေတဲ့ နိူင်ငံရေးအမြင် မရှိသူတွေက ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ စစ်တပ်တွေဖွင့်တော့ ရန်သူမရှိတဲ့ရခိုင်မှာ ဘာလို့ စစ်တပ်တွေ အများကြီးဖွင့်ရတာလည်းလို့ လက်ညှိုးထိုး ဖွခဲ့ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ တိုင်းရင်းသားရခိုင်နယ်မြေမှာ မမြင်ရတဲ့ ရန်သူတွေရော မြင်ရတဲ့ ရန်သူတွေရော ရှိနေခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒါကို အရင်ဆုံး သဘောပေါက်နေခဲ့ကြသူတွေမှာ ဘင်္ဂလားရော အနောက်နိူင်ငံကြီး အချို့ရော အာရှကနိူင်ငံအချို့ရော ပါဝင်သလို လှုပ်ရှားမူတွေလည်း ရှိနေခဲ့ကြပါတယ်။ NGO တွေ UNHCR တွေ ဆိုတာဟာလည်း ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများအတွက် မဟုတ်ပဲ မယောင်ရာဆီလူးပြီး လူသားချင်းစာနာမှု အစီအစဉ် ခေါင်းစဉ်ပြကာ ဘင်္ဂါလီ ကျေးရွာများအတွက် ကယ်တင်စောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့ လုပ်ငန်းလိုမျိုး ကြံစည်လှုပ်ရှား နေခဲ့ကြတဲ့ အဖွဲ့တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီး UNHCR အကူအညီဖြင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက်ခြမ်းမှာ ဖွင့်ထားသော နရပရ ဘင်္ဂလီ ဒုက္ခသည်စခန်းမှ ဘင်္ဂလီ ဒုက္ခသည်များ ဆန္ဒပြနေပုံ
ပြဿနာဖြစ်ပွားရခြင်းရဲ့ လတ်တလော အကြောင်းအရာကိုကြည့်ရင် နံပါတ်တစ်က - မြန်မာနိူင်ငံမြေပုံ ရခိုင်တိုင်းရင်းသား နယ်မြေနေရာမှာ ဘင်္ဂလီတွေရဲ့ပုံကို ထည့်ပြီး ဝါဒဖြန့်ပေးခဲ့တဲ့ ဘီဘီစီ အသံလွှင့်ဌာနရဲ့ လှုံ့ဆော်မူ၊ နံပါတ်နှစ်က - ရခိုင်အမျိုးသမီး မသီတာထွေး အသက် (၂၇) နှစ်ကို မွတ်ဆလင်ဘာသာဝင် ဘင်္ဂလီလူမျိုးသုံးဦးက မုဒိန်းကျင့်ပြီး လည်ပင်းကိုလှီး ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ နံပါတ်တစ်ဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်ရင် ဘီဘီစီဟာ မြန်မာနိူင်ငံအပေါ် သွေးထိုးလှုံ့ဆော်မူပြုရာမှာ ကြိုတင်မျှော်တွေးနိူင်ပြီး ထိရောက်အောင် ဆောင်ရွက်တဲ့ နေရာမှာ သိပ်ထူးချွန်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။
မောင်တောမြို့ပေါ်မှ ဘင်္ဂလီလူအများစုကို ဒုတ်ဓါးလက်နက်များဖြင့် တွေ့ရပုံ
နယ်စပ်ဒေသဆိုတာ နှစ်ဘက်ကူးလူး ဆက်ဆံမူများ ရှိနေပြီး ရေကြည်ရာမြက်နုရာဘက်ကို ပြောင်းရွှေ့အခြေချတတ်တာ သဘာဝပါ။ ဒါကြောင့် ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောဒေသမှာ ဘင်္ဂလီတွေ ကူးဝင်နေထိုင်နေကြတယ်ဆိုတာ ကလေးသိခွေးသိ သိနိူင်တဲ့အချက်ပါ။ ဘင်္ဂလားဒေသဟာ သမိုင်းအရ ခရစ်တော်မပေါ်မှီကာလ ဓည၀တီခေတ် မင်းဆက်များ၊ ရခိုင်မင်းများပိုင်ဆိုင်သော ဒေသဖြစ်ခဲ့ပြီး ၁၆ ရာစုအကုန်လောက်မှာ မဂိုမူဆလင်ဘုရင်များ လက်အောက် ကျရောက်ခဲ့ရပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားရာ နယ်မြေတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း ထိုအချိန်ကစပြီး မူစလင်ဘာသာ နေရာယူခဲ့ပါတယ်။ ရခိုင်လူမျိုးများဟာလည်း စစ်တကောင်းတောင်တန်းများ တဝိုက်မှာ ခိုအောင်းနေခဲ့ကြပြီး အဝကျွန်းများရှိရာဒေသ နတ်မြစ်ရဲ့ တဘက်ကမ်း ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောနယ်စပ်တွေမှာ နေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ မြန်မာဘုရင်လက်ထက် အင်္ဂလိပ်အရှေ့အိန္ဒိယကုမ္ပဏီကို စောင့်ရှောက်ရတဲ့ ဗြိတိသျှစစ်တပ်တို့ မတိုက်ခိုက်ခင် အချိန်ထိ နတ်မြစ်တလျောက် ရှင်မဖြူကျွန်း အပါအဝင်မှာ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတို့ နေထိုင်လာခဲ့ကြပြီး အင်္ဂလိပ်က ရခိုင်ကို သိမ်းပိုက်ချိန်ကစလို့ ဘင်္ဂလီတွေ စတင် ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ မြန်မာတစ်နိူင်ငံလုံးကို အင်္ဂလိပ်က သိမ်းပိုက်ထားချိန်မှာတော့ ဘူးသီးတောင် မောင်တောနယ်စပ်ကနေ ဘင်္ဂလီတွေ အများအပြား လှိမ့်ဝင်လာခဲ့ကြလို့ မြန်မာပြည်ဘုရင်ခံကတောင် တားဆီးယူရတဲ့အထိ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
မောင်တောမြို့ အ၀င် မုဒ်ဦးပုံ
အိန္ဒိယက မြန်မာနိုင်ငံထက်စောပြီး လွတ်လပ်ရေးရချိန်မှာ ဘင်္ဂလားဒေသဟာ အိန္ဒိယ၊ ပါကစ္စတန် လက်အောက်ခံဖြစ်ခဲ့ပြီး နောက်တော့ အရှေ့ပါကစ္စတန်ကို ပုန်ကန် ခွဲထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ ရှင်မဖြူကျွန်းဟာလည်း အိန္ဒိယနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေး ရကတည်းက ဘင်္ဂလားလက်ထဲ ပါသွားခဲ့ပါတယ်။ ပါကစ္စတန်နဲ့အိန္ဒိယ ခွဲချိန်မှာ ဘင်္ဂလီတွေဟာ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောနယ်ကိုတောင် ပါကစ္စတန်နယ်မြေထဲထည့်ဖို့ လှုပ်ရှားခဲ့ဖူးပါတယ်။ နောက်ပိုင်း အများအပြား ထပ်မံခိုးဝင်လာခဲ့ကြတာကြောင့် အနောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ၀မ်းတင်လက်ထက်တွင် နဂါးမင်းစစ်ဆင်ရေးနဲ့ တားဆီးခဲ့ရာမှာ ဘင်္ဂလားဘက် ပြန်ပြေးသွားတဲ့ဘင်္ဂလီတွေကို ကုလသမဂ္ဂအစီအစဉ်နဲ့ ပြန်ပြေးသွားတဲ့ အရေအတွက်ထက် ပိုမိုပြီး လက်ခံပေးခဲ့ရပြန်ပါတယ်။ http://bdcburma.wordpress.com/ မှာ အခြေအနေကို လေ့လာကြည့်ရူနိူင်ပါတယ်။ ဦးနေဝင်း လက်ထက်မှာပါ။ သို့သော်လည်း ဝင်လာမစဲ တသဲသဲရှိနေခဲ့ပြီး ပြည်မထဲက ရန်ကုန်အထိ ဝင်လာနိူင်ခဲ့ကြတာ ကိုယ်တွေ့မို့ စာရေးသူတောင် လန့်သွားခဲ့မိပါတယ်။ မှတ်ပုံတင်လည်းမရှိ မြန်မာ စကားလည်း တစ်လုံးမှ မတတ်သူတွေဖြစ်ပြီး အချိန်ကာလအားဖြင့် ရန်ကုန်မှာ စစ်တပ်နဲ့နယက တယက မယက ရယကတို့က ကိုယ့်မိဘပြည်သူလူထုကို ကောင်းကောင်းကြီး နှိပ်စက်နေတဲ့ အချိန်ထဲမှာပါ။ (ဧည့်စာရင်းကို မြန်မာချင်း ခြင်ထောင်လှန်စစ်ပြီး အရံမီးသတ်နဲ့ အလိုတော်ရိ ရပ်ကွက်လူကြီးဆိုသူတွေက မူးရူးအနိူင်ကျင့်နေချိန်မှာပါ။)
မောင်တောမြို့ ပဋိပက္ခအတွင်း ဘင်္ဂလီလူမျိုးများပုံ
ပြန်ပြီးဆက်ရရင် ဘင်္ဂလီတွေဟာ စကတည်းကယဉ်သကို ဆိုသလို မူဂျာဟစ်သောင်းကျန်းသူ၊ ကုလားဆိုး သောင်းကျန်းသူတွေအဖြစ်နဲ့ ဒေသခံရခိုင်ရွာများကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်း၊ သတ်ဖြတ်ခြင်းများပြုကာ နယ်မြေသိမ်းဖို့ လုပ်လာခဲ့ကြတဲ့အတွက် တပ်မတော်က စစ်ကြောင်းတွေက ဝင်ရောက် ရှင်းလင်းခဲ့ကြရပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာလည်း သူတို့ဟာ ဘင်္ဂလီမူဆလင် ဒေသတစ်ခု ထူထောင်ဖို့ကို ရည်ရွယ်လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးအရသော်၎င်း၊ စစ်ရေးအရသော်၎င်း မူဂျာဟစ်များ၊ ယခု အယ်လ်ကိုင်ဒါများနဲ့ ချိတ်ဆက် စစ်သင်တန်းတွေတက်လို့ ပြင်ဆင်ထားခဲ့ကြပါတယ်။ အတိတ်ကဆိုရင် ၁၉၄၂ သမိုင်းကြောင်း၊ ၁၉၈၈ သမိုင်းကြောင်းတွေ များစွာ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဘင်္ဂလီတွေက ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကို တိုက်ခိုက် သတ်ဖြတ်ခဲ့တာတွေပါ။
၁၉၉၂ မှာတောင်မှ လူ (၁၅၀၀) ကျော် (မြန်မာစစ်တပ် တပ်ရင်းတစ်ခုမှာ ဖွဲ့စည်းပုံအပြည့်ဆိုရင် ၇၈၃ ယောက် ဝန်းကျင်ရှိခဲ့တာပါ) လှေနဲ့ကူးလာပြီး ကြိုတင်ဝှက်ထားတဲ့ လက်နက် ခဲယမ်းတွေ ကားခုနှစ်စီးကျော်ကျော်နဲ့ လူလက်နက်ဖွဲ့စည်းမှု မပြုနိုင်ခင်လေးမှာ လက်မတင်လေး တားဆီးရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။ ဘင်္ဂလီအမာခံများဟာ မောင်တော၊ ဘူးသီးတောင်မှာ အများကြီး ခိုအောင်းနေခဲ့ကြပါတယ်။ တကယ်လို့ ဘင်္ဂလီတွေဟာ ဖွဲ့စည်းပုံ လုပ်ပြီးသွားရင်တော့ မောင်တော ဘူးသီးတောင်ဒေသဟာ သွေးချောင်းစီးပြီး သူတို့လက်အောက် ကျရောက်သွားခဲ့နိူင်ပါတယ်။
ဒါတွေက တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ကျောက်ပန်းနုရွာဘက်က လှိုဏ်ဂူတစ်ခုထဲမှာ ဖွက်ထားတဲ့ လက်နက်တိုက်ကိုလဲ သိမ်းမိပါတယ်၊ လက်နက်တွေ အများကြီးလို့ ဒေသခံတွေဆီက သိခဲ့ရပါတယ်။ သူတို့နဲ့ လက်နက်နဲ့သာ တွဲမိလိုက်ရင် မလွယ်ပါဘူး။ အဲဒီတုန်းက ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိစ္စ မီဒီယာတွေက အရမ်းအော်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဘီဘီစီ၊ အာအက်ဖ်အေ အသံအကျယ်ဆုံးပါ။ ဒေသခံတွေရဲ့ ပြောစကားအရတော့ မြန်မာဘက်ကမ်းမှာ ရှိနေခဲ့တဲ့ အမာခံတွေ အများစုကိုပါ ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီတုန်းကစပြီး နစကတပ်ဆိုတာက်ို စတင်ဖွဲ့စည်းပြီး သူတို့ကို ထိန်းချုပ်ခဲ့တာလို့ သိရပါတယ်။
(ဒေါက်တာဇာနည် ပြောကြားချက်) ။ ယခုထက်ထိ နိုင်ငံရေးအရဖြစ်စေ၊ စစ်ရေးအရဖြစ်စေ ဒီနယ်မြေကို သိမ်းပိုက်နိူင်ရန် အစီအစဉ်ချထားမှုက အခိုင်အမာ ရှိနှင့်နေပြီးသားပါ။ ဒါဟာ လှုံ့ဆော်နေတာ မဟုတ်ပဲ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများနဲ့တကွ မြန်မာပြည်သူလူထု တစ်ရပ်လုံးက မျက်စိကိုဖွင့် နားကိုစွင့်ပြီး အထူးသတိပြုထားနိုင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုခုဆိုရင် လူသားချင်းစာနာပါဆိုတဲ့ နိူင်ငံရေးလိုလို စကားတွေဟာ ဒီလိုဘင်္ဂလီ အဖျက်သမားတွေကို နှိမ်နင်းရာမှာ အနှောက်အယှက်များစွာ ဖြစ်စေပါတယ်။ ပြည်“မ”နေ မြန်မာနိူင်ငံရေးသမား ဆိုသူတွေကိုယ်တိုင် ကောင်းကောင်း သဘောမပေါက်ကြတာပါ။ ဒီနယ်မြေကိုလည်း မရောက်ဖူးဘူး၊ ဒီသမိုင်းကိုလည်း မလေ့လာဖူးဘဲ စာဖတ်ပြီး ပြောနေကြသလိုပါပဲ။ တကယ်က မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေဟာ စိတ်ရင်းစေတနာကောင်းပြီး ယဉ်ကျေးပြီးသားပါ။ ဒါကို ဘင်္ဂလီပြဿနာဖြစ်မှ ဆရာကြီး ဆရာမကြီးလေသံတွေနဲ့ ဆောင်းပါးတွေရေးကြ အသံတွေဗျူးပေးကြနဲ့ ကိုရွှေတို့ အတော်အလုပ်များကြပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာတောင် ဒီလိုစာမျိုးနဲ့ ဆရာကြီး လုပ်ထားတာကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။
မောင်တောမြို့ ပဋိပက္ခတစ်ခုအတွင်း ဒဏ်ရာရသူ ရခိုင်အမျိုးသား တစ်ဦးပုံ
(ပထမ ရာဇဝတ်မှုဖြစ်စဉ် (အဓမ္မ သားမယားပြုကျင့်၊ ပစ္စည်းယူ၊ လူသတ်မှု) မှာ ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တဲ့ သူတွေရဲ့ လူမျိုး၊ ဘာသာမတူမှုကို အသားပေးပြောဆို သွေးထိုးလှုံ့ဆော်စည်းရုံးပြီး အရက်၊ မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ကျွေး သွေးဆောင်ခံခဲ့ရတဲ့ အသိပညာ အခြေခံနည်း လူတချို့လည်း ပါကောင်းပါနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စတင် အစီအစဉ်ချ၊ လမ်းကြောင်းပေးတာကတော့ အစိုးရ (သို့) အစိုးရထောက်ခံသူ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုရဲ့ ဦးဆောင်မှု၊ ပါဝင်ပတ်သက်မှုဆိုတာ ဖြစ်စဉ်ကိုလေ့လာရင် ထင်ရှားပါတယ်။ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မှီတင်းနေထိုင်နေတဲ့ လူနည်းစု လူမျိုးခြား၊ ဘာသာခြားတွေကို အဆင့်တန်းရှိရှိ ခေါ်ဝေါ်ပြောဆိုသုံးနှုန်းမှ ယဉ်ကျေးတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်လာမှာပါ။ မြန်မာ - ခရစ်ယာန်၊ မြန်မာ - မွတ်ဆလင်၊ မြန်မာ - ဟိန္ဒူ၊ မြန်မာ - တရုတ် (တရုတ်လူမျိုးအနွယ် မြန်မာနိုင်ငံသား)၊ မြန်မာ - အိန္ဒိယ (အိန္ဒိယလူမျိုးအနွယ် မြန်မာနိုင်ငံသား) စသည်ဖြင့် ယဉ်ကျေးစွာ တစ်ဦးချင်း စံနမူပြု သုံးစွဲခြင်းဖြင့်) ငြိမ်းချမ်းအေး ဆိုသူပါ။ သူဟာ ရှင်မဖြူကျွန်းကိစ္စ၊ ရေပြင်ပိုင်နက်ကိစ္စတွေမှာလည်း အခံဘက် အပေးဘက်ကနေ ဗမာတွေဟာ အာသံ၊ မဏိပူရအရေးမှာ ဝင်စွက်ဖက်တယ်ဆိုတာမျိုး၊ မဟာဗန္ဓုလဟာ ဗြိတိသျှပိုင် စိန့်မာတင်ကျွန်းပေါ်ကို လူမိုက်ဆန်ဆန် တက်ရောက် တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တာ ဆိုတာမျိုးနဲ့ မြန်မာစိတ်ဓါတ်ကို ရိုက်ချိုးခဲ့သူပါ။ မြန်မာစစ်စစ်တစ်ယောက်မှ ဟုတ်ပါရဲ့လားလို့ သံသယ၀င်မိပါတယ်။
ဘင်္ဂလီများဟာ ယခုလို မော်တော်လှေငယ်များဖြင့် သက်စွန့်ဆံဖျား ရေမြေရပ်ခြား တိုင်းတပါးသို့ ကျူးကျော်သွားရောက်နေပုံ
ရှင်းရှင်းလေး တွေးကြည့်လိုက်ကြပါ။ မြန်မာတွေဟာ သည်းခံစိတ်နဲ့ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ စိတ်ကောင်းရှိလို့ မြန်မာပြည်ဖွား တရုတ်ကုလားတွေ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ သူတို့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးနဲ့ အေးအေးချမ်းချမ်း မြန်မာမြေပေါ်မှာ ရပ်တည် နေထိုင်နိူင်ကြတာပေါ့ခင်ဗျာ။ ဒါပေမယ့် အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကို ထိခိုက် စော်ကားလာချိန်မျိုးမှာ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကလည်း ချက်ခြင်းတုန့်ပြန် မပေးနိုင်တဲ့အခါ အဆင်သင့်သလို လက်တုန့်ပြန်နေကြတာ အမျိုးချစ်စိတ်ရှိသူတွေရဲ့ သဘာဝပါပဲ။ မူဆလင်ဘာသာဝင် အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်လို့ ရှိပေမယ့် မူဆလင်လူမျိုးရယ်လို့တော့ သတ်သတ်မှတ်မှတ် မရှိပါဘူး။ အဆင်ပြေအောင် ခေါ်လိုက်တဲ့သဘောပါ။ အဲဒီတော့ ရှေးကတည်းက နှိမ်တာမဟုတ်ပဲ ကုလားဖြူ၊ ကုလားမဲ ခေါ်လာကြတယ်။ မိစ္ဆာဒိဌိလူမျိုးလို့ ခေါ်နေတာကနေတောင် ပြောင်းလဲခေါ်လာခဲ့ကြတယ်။ ပဝေသဏီက ခေါ်လာတော့ နှုတ်ကျိုးနေပြီဗျာ။ ခင်မင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကိုတောင် ချစ်ရင်လည်းကုလားလို့ခေါ် ဒေါသထွက်ရင်လည်း ကုလားလို့ခေါ်တာပါ။ ဆရာက အခုမှ တရုတ်ကိုတော့ မြန်မာတရုတ်လို့ပြောပြီး ကုလားကျတော့ မြန်မာအိန္ဒိယ မြန်မာမူဆလင်၊ မြန်မာဟိန္ဒူတဲ့။ မြန်မာခရစ်ယာန်တဲ့။ မရှိပါဘူး။ တိုင်းရင်းသားအားလုံးက မြန်မာတွေပါ။ လူမျိုးစုကို ခွဲခြားသိချင်ရင်သာ ဥပမာ - ကချင်လူမျိုး ကိုးကွယ်ရာက ဗုဒ္ဓဘာသာ (သို့) ခရစ်ယာန်။ ကရင်လူမျိုး ကိုးကွယ်တာက ဗုဒ္ဓဘာသာ (သို့) ခရစ်ယာန်ပေါ့ဗျာ။ ရှင်းနေတာကို ရှုပ်အောင် ဝင်လုပ်နေတယ်။ နိုင်ငံခြား ရောက်နေကြသူတွေဆိုရင်တော့ ခေါ်ရတာ အဆင်ပြေမယ်။
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အစ္စလာမ်ဘာသာရေး အဖွဲ့ကြီးရဲ့ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ပုံ
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အစ္စလာမ်ဘာသာရေး အဖွဲ့ကြီးက သဘောထားထုတ်ပြန်ကြေညာချက်မှာ ကျောက်နီမော်က ရခိုင်အမျိုးသမီးလေးကို လည်လှီးသတ်ဖြတ်ကာ မုဒိန်းကျင့်သတ်မူအတွက် ရှုံ့ချတယ်ဆိုတာ မပါဝင်ထားတာဟာလည်း စဉ်းစားစရာပါ။ ဒီလို လည်လှီးသတ်တာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဗဟုသုတ ပြောပြပါဦးမယ်။
သားပေါ်မည့်သူဟာ မွတ်ဆလင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး စိတ်ပုံမှန်ရှိ စိတ်ကျန်းမာသူ။ (စိတ်ပေါ့သွတ်သူမဟုတ်ရ)သားပေါ်မည့် သတ္တဝါသည် တရားတော်နှင့် ညီညွတ်ရမည်။ (ဝက် တောဝက် ခွေး မြွေ မျောက် ကျား ခြသေ့င်္ ဝက်ဝံ ကြွက် ကင်းခြေများ ကင်းမြီးကောက် ဖား မိချောင်း ပရွက်ဆိတ် ပျား သန်း ယင်ကောင် လောက် မြည်း လား အဆိပ်ရှိ သတ္တဝါများ မဟုတ်ရ)၊ သားပေါ်မည့် သတ္တဝါသည် အရှင် (သို့) အသက်ရှင်နေရမည်။ သားပေါ်တိုင်း နှုတ်မှ ဘစ်စမီလာဟ် အလ္လာဟ်အရှင် နာမတော်ကို အောက်မေ့ရွတ်ဆို ပူဇော်သည်နှင့် သားပေါ်ခြင်း အမူပြုရမည်။ သားသတ်ရန် ကိရိယာသည် ချွန်ထက်ပြတ်ရှသော ပစ္စည်းမျိုးဖြစ်ပြီး သတ်နေစဉ်အတွင်း သတ်သည့်ကိရိယာသည် သတ္တဝါနှင့်ကင်းကွာခြင်း မရှိစေရ (အကြိမ်ကြိမ် ခုတ်ထစ် သတ်ဖြတ်ခြင်း မဟုတ်ပဲ ကြိတ်လှီးခြင်း) သားသတ်ရာတွင် အသတ်ခံသတ္တဝါ၏ လည်မျိုတဝိုက်ရှိ လေပြွန်၊ အစာရေစာမျိုလမ်းကြောင်း၊ ပင်မသွေးကြောနှင့် သွေးပြန်ကြောများကိုပါ တပါတည်း ပိုင်းဖြတ်စေရမည်။ တဲ့….ခင်ဗျ။ လည်လှီးအသတ်ခံရမည့် သတ္တဝါဟာ အနှီစာရေးသူ ငြိမ်းချမ်းအေးသာ ဖြစ်နေရင် ဘယ်လို ခံစားနေမလည်းဆိုတာ ခဏဝင်စဉ်းစားဖို့ပါ။ ဒါတွေ တင်ပြရေးသားနေတာဟာ လှုံ့ဆော်ခြင်း၊ စော်ကားခြင်း၊ မုန်းတီးခြင်းများ အလျဉ်းမပါရှိပါ။ အဖြစ်မှန်အတိုင်း မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေ သိရှိနားလည် သဘောပေါက်စေရေးကိုသာ ရည်ရွယ်ပါတယ်။
ဘင်္ဂလီလူမျိုးများ မီးရှို့မှုကြောင့် စစ်တွေမြို့ အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်ရှိ နေအိမ်များ မီးလောင်ကျွမ်းနေပုံ
နောက်တစ်ခု သဘောပေါက်စေချင်တာက ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောနယ်စပ်က တဘက်ကနေ ဝင်လာတဲ့ ဘင်္ဂလီတွေနဲ့ မြန်မာပြည်တွင်းမှာ ဘိုးဘွားမိဘ လက်ထက်ကတည်းနေလို့ ပေါက်ဖွား ကြီးပြင်းလာတဲ့ မွတ်ဆလင်ဘာသာ ကိုးကွယ်သူတွေ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေ ဆစ်ခ်တွေ ပန်ချာဘီနဲ့ ဂေါ်ရခါးတွေဟာ မတူညီကြပါဘူး။ ပြည်တွင်းက ကုလားအမျိုးသားတွေဟာ မြန်မာပြည်ကို မြန်မာတွေအတိုင်းပဲ ချစ်ကြတယ်။ မြန်မာစ်ိတ်ရှိတယ်။ မြန်မာလို တွေးခေါ်ကြတယ်။ ပြည်ပမှာဆိုရင် တစ်ခြားနိူင်ငံသားတွေနဲ့ မြန်မာတွေ တစ်ခုခုချိတ်စောင်းမိရင် မြန်မာဆိုတဲ့အသိနဲ့ မြန်မာဘက်ကနေ ပါတဲ့သူတွေပါ။ အစွန်းရောက် ဘာသာရေး အတွေးအခေါ်ရှိသူ တချို့ကတော့ ချွင်းချက်ပါပဲ။ မူဆလင်တွေကတော့ ဘာသာရေးသာ တူညီတယ် လူမျိုးမတူဘူး ဆိုတာလည်း သတိပြုမိစေချင်ပါတယ်။
ဇွန်လ ၅ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ ဆူးလေစေတီအနီးရှိ ဗလီဝတ်ကျောင်းရှေ့တွင် ဆန္ဒပြသူ အစ္စလမ် ဘာသာဝင်များကို ကိုမြအေး လာရောက်ပြီး ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲ နေထိုင်ကြရန် ပြောဆိုနေပုံ
ကိုမြအေး ထောက်ပြ ပြောဆိုခဲ့တာကလည်း အတော်ကောင်းပါတယ်။ အမှန်ပါပဲ။ ပြည်တွင်းက မူဆလင်အမျိုးသားများ သတိပြုသင့်ပါတယ်။ အစ္စလာမ်ဘာသာနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အရေးလို ဖန်တီးနေတဲ့ လူတွေရှိတယ်။ ရိုဟင်ဂျာအများစုက အစ္စလာမ်တွေလေ။ ဒါကို အကြောင်းပြုပြီး အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေ အရေးဆိုပြီး လုပ်နေတဲ့ အစွန်းရောက်တဲ့သူများ ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ လုံးဝလက်မခံနိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော် တို့က မြန်မာမွတ်စလင်ပါ။ ကျွန်တော်တို့က ရိုဟင်ဂျာ မဟုတ်ဘူး။ နောက်တစ်ခုကို ရခိုင်လူမျိုးတွေကို ပြော ချင်တယ်။ မှန်ပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနဲ့ ကပ်နေလို့ ကိုယ့်အမျိုးသားရေး ခံကတုတ်ကိုတော့ ပြင်ရမှာပဲ။ ဒါ ကျွန်တော်လုံးဝ နားလည်တယ်။ ဒီလိုမဟုတ်ရင် သန်းရာကျော် နိုင်ငံကနေ ပြိုလာမယ့် လူမျိုးတွေအနေနဲ့ ရခိုင်အမျိုးသားတွေ စိုးရိမ်မယ်ဆိုတာကို ကောင်းကောင်း နားလည်ထားတယ်။ ဒါက ဘင်္ဂါလီတွေ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကလာတဲ့ ပြဿနာတွေကို ရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာ ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ အေးချမ်းစွာ နေထိုင်စားသောက်နေတဲ့ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တွေနဲ့ မသက်ဆိုင်ဘူးလိုိ့ ရှင်းရှင်းပြောချင် တယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက စိမ့်ပြိုလာမယ့်ကိစ္စကို ကျွန်တော်တို့လည်း မလိုလားဘူး။ အိန္ဒိယနဲ့လည်း ကပ်နေတယ်။ အလားတူပဲ တရုတ်ပြည်နဲ့လည်း ကပ်နေတာ။ ဒါ လူမျိုးရေးကို ရှေ့တန်းတင်တာမဟုတ်ဘူး၊ သို့သော်လည်း ကျွန်တော်တို့ အမျိုးသားရေးကိုတော့ ရှေ့တန်းတင်ရမှာပဲ။
ရိုဟင်ဂျာအစား ဘင်္ဂလီလူမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဘင်္ဂလီကုလားမျိုးလို့ သုံးသင့်တာကလွဲလို့ လေးစားလောက်တဲ့ ပြတ်သားတဲ့ အတွေးနဲ့အပြော ဖြစ်ပါတယ်။ တချို့မြန်မာတွေတောင်မှ ဒီလိုမပြတ်သားပဲ အီးယောင်ဝါးလုပ်ပြီး ပြောနေကြတာပါ။ ဘင်္ဂလီအရေးဖြစ်ပြီး မူဆလင်ဘာသာရေး မဟုတ်ပါဘူး။ ဘင်္ဂလီကိစ္စဟာ ရှုထောင့်မျိုးစုံကနေ ကြည့်ပြီးမှ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမယ့် အရေးကိစ္စတစ်ခုပါ။ ဘင်္ဂလီတွေဟာ မူဆလင်ဘာသာရေးကို ဘန်းပြပြီး ပြည်တွင်းက အစွန်းရောက် မူဆလင်တချို့နဲ့ အဆက်အစပ် လုပ်လာတဲ့သဘော တွေ့နေရပါတယ်။ ဘာသာရေးဆက်စပ်မူလုပ်ပြီး ညီအစ်ကိုဖွဲ့လို့ လူမျိုးရေးကို ကျူးကျော်လာချင်တဲ့ သဘောပါ။ ရခိုင်နယ်စပ် အရေးကိစ္စတွေမှာ အစိုးရရဲ့ပေါ်လစီဟာ ပြတ်သားမူမရှိပဲ မှားယွင်းနေခဲ့ပါတယ်။ လိုတစ်မျိုး၊ မလိုတစ်မျိုး ဖြစ်နေပြီး ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေအပေါ် တချို့သော အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေဟာ သဘောထား မမှန်ခဲ့တာတွေဟာလည်း အမှားတွေပါပဲ။
တကယ်တော့ ပြည်မပြည်တွင်းနေ မူဆလင်အမျိုးသားတွေနဲ့ ဘင်္ဂလီတွေ ချိတ်ဆက်ပေးခဲ့ကြတဲ့အထဲမှာ တပ်မတော်လူမိုက်ကြီး ဗိုလ်မောင်ဦးတောင် ပါပါတယ်။ ဒါတွေကို ဒီနေ့ဦးသိန်းစိန်အစိုးရအဖွဲ့ အီးယောင်ဝါး လုပ်မနေပဲ တိကျပြတ်သားတဲ့ ဥပဒေပြဌာန်းမူတွေ၊ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မူတွေ ဥပဒေစိုးမိုးမူ ရှိစေရေး ဆောင်ရွက်မူတွေ နယ်စပ်လုံခြုံရေး ဆောင်ရွက်မူတွေကို လုပ်ကြဖို့သင့်ပါတယ်။ ဥပဒေစိုးမိုးရေးမှာ ဒေသအခြေစိုက် တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့များက ကူညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောဒေသအတွက် လိုအပ်နေပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့ရှိ တခြမ်းဗဲ့ ဗလီပုံ
တဆက်တည်းမှာ ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ မူဆလင်ဘာသာဝင်များကို အသိပေးချင်တာကတော့ ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အစွန်းမရောက်ဖို့နဲ့ ဘာသာရေးအရ သွေးထိုးမူကို လက်မခံဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အစွန်းမရောက်သရွေ့ ထိပါးမစော်ကားသရွေ့ မိမိတို့ဘာသာတရားကို လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ယုံကြည်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်တုန်းကမှ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာ မူဆလင်တွေကို စတင် မစော်ကားခဲ့ဖူးပါဘူး။ ပြဿနာရှိခဲ့ရင်တောင် မေ့မေ့ပျောက်ပျောက် ထားခဲ့ကြတယ်ဆိုတာ မြန်မာအကြောင်း နားလည်တဲ့သူတိုင်း သိကြပါတယ်။ ပြဿနာကို စချင်တာက အစွန်းရောက် မူဆလင် တချို့တော့ ရှိနေပါတယ်။ မြန်မာမကို ယူနိုင်ရင် ငွေထောက်ပံ့မယ် တစ်ပြည်လုံး မူဆလင်ဖြစ်ရမယ် စသဖြင့် လုပ်နေတာတွေ၊ အဓမ္မ ဘာသာထဲ ဝင်ခိုင်းတာတွေ အခြားဘာသာဝင်တွေရဲ့ ကိုးကွယ်ရာကို နင်းခိုင်းပြီးမှ ဘာသာရေး သွပ်သွင်းမှုတွေ လုပ်တာမျိုးတွေဟာ ကိုယ်တွေ့ရော အခြား အထောက်အထားတွေရော ရှိနေပါတယ်။ ဆရာဦးဆန်းလွင်ကိုယ်တိုင် ဟောပြောပြထားတွေကိုလည်း နားထောင်ဖတ်ရှု နိူင်ပါတယ်။ ဒီတော့ ဘာသာရေးအရရော လူမျိုးရေးအရရော အတူငြိမ်းချမ်းစွာ ယှဉ်တွဲနေချင်ရင် အစွန်းရောက်မူဆလင်များကို အခြား မူဆလင်ဘာသာဝင်များ အနေနဲ့ ဝိုင်းဝန်း ထိန်းသိမ်းသင့်ပါတယ်။ အရှင်ဝီရသူကလည်း ဒီလို တိုက်တွန်းထားခဲ့ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် မူဆလင်ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့် မိမိတို့၏ ဘာသာဝင်များက မြန်မာပြည်ဖွား တိုင်ရင်းသားများအပေါ် စော်ကားမော်ကား ပြုကျင့်ခြင်း၊ ရန်လိုရန်စသော အပြုအမူများ ပြုလုပ်ခြင်းများ မရှိရလေအောင် အလေးအနက်ထား၍ ဆုံးမပဲ့ပြင် သွန်သင်ပြသသင့်ကြောင်း၊ ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးက ရွံ့ရှာမုန်းတီးနေသော မူဆလင်များ၏ အစွန်းရောက် အပြုအမူများကို ရှောင်ကြဉ်သင့်ကြောင်း အတိအလင်း ပြောကြားလိုပါသည်။
တကယ်တော့ ဘင်္ဂလီတွေဟာ ပြည်တွင်းမှာသာ မဟုတ်ပဲ ပြည်ပမှာတောင် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး မြန်မာတိုင်းရင်းသားဆိုပြီး လိမ်လည်နေတာပါ။ မြန်မာစိတ်ရှိတဲ့ မြန်မာမူဆလင် မိတ်ဆွေတွေက လက်မခံကြောင်း၊ မိမိတို့နဲ့ လူမျိုးမတူကြောင်း ပြောပြရှာပါတယ်။ တချို့ကျတော့လည်း ဘာသာတူတာကို အကြောင်းပြုလို့ ဒုက္ခသည်အဖြစ် နေထိုင်ခွင့်လျှောက်ရာမှာ ရန်ကုန်မြို့တွင်း နေထိုင် မွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့ပါလျက် ရိုဟင်ဂျာပါဆိုပြီး ဒုက္ခသည်ယောင်ဆောင်တဲ့သူ တချို့တော့ ချွင်းချက်ပါ။ အဲဒီတော့ ဖေါ်ပြခဲ့တဲ့ အချက်အလက်များကို ပြန်ပြီးစုစည်း နိဂုံးချုပ်ရရင် ဘင်္ဂလီပြဿနာသည် ယခင်ကပင် ဖြစ်ပေါ်ဖို့ တည်ရှိနေသော အကြောင်းများကြောင့်၎င်း၊ လတ်တလော ဘီဘီစီပြဿနာကောင်နှင့် လူမဆန်စွာ မုဒိန်းကျင့် လူသတ်မူတို့ကြောင့်၎င်း ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရာ ဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရကို၎င်း၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကို၎င်း စနစ်တကျ ပြဿနာဖန်တီးနေတာပါလို့ ရေးနေ ပြောနေတာတွေ၊ အာအက်ဖ်အေက လန်ကျုတ်လုပ် ဗျူးတာတွေကသာ ပြဿနာကြီးထွားလာဖို့ ဖန်တီးနေခြင်းနဲ့ ပြည်သူလူထုကို အထင်အမြင်မှားစေဖို့ အာရုံလမ်းလွှဲဖို့ လုပ်နေတာတွေဖြစ်ကြောင်း နားလည်သဘောပေါက်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုပြဿနာဟာ မူလရှိထားတဲ့ ဘင်္ဂလီလူမျိုး ပြဿနာအပေါ် အခြေခံနေပါတယ်။ မူဆလင်ဘာသာဝင်တွေ ဖြစ်သော်လည်း မူဆလင် ဘာသာရေးပြဿနာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ပြည်တွင်းက မူဆလင်တွေကို ဘာသာရေးတူညီမူနဲ့ ဆွဲသွင်းနိူင်သလို ပြည်တွင်းက မူဆလင်အစွန်းရောက်များကလည်း ပါဝင်ပတ်သက်လာနိူင်တဲ့အတွက် ပြည်တွင်းက မူဆလင်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းက ကိုမြအေးနည်းတူ ဝိုင်းဝန်း ထိန်းသိမ်းကြရပါလိမ့်မယ်။
Rohingya Solidarity Organization (RSO) ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်သူ Dr. Muhammad Yunus (ရပ်နေသူ)နဲ့ Arakan Rohingya Union (ARU) မှ Director General ဒေါက်တာ ၀ါကာအူဒင်း Wakar Uddin တို့ကို ဘင်္ဂလီ ညီလာခံတွင် တွေ့ရပုံ
ပြည်တွင်းမှာ ဘာသာတရားအားလုံး ဘယ်ဘာသာတရားကိုမျှ ထိပါးပုတ်ခတ် စော်ကားတာတွေမလုပ်ပဲ ညီညွတ်အေးချမ်းစွာ ယှဉ်တွဲနေထိုင်နိုင်ဖို့ အဆုံးအမပေးရန် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တိုင်းမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ မီဒီယာတွေ အနေနဲ့လည်း မလိုလားအပ်တဲ့ အင်တာဗျူးတွေ ဆောင်းပါးတွေ ပါဝင်မလာစေရေးအတွက် စီစီစစ်စစ် လုပ်ကြသင့်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ဒီတခါ ပြည်သူလူထုကို လိမ်လည် လှည့်ဖျားလာသူတွေဟာ မီဒီယာတချို့ဖြစ်လို့ပါပဲ။ နိဂုံးချုပ်မှာ အထူး တိုက်တွန်းချင်တာကတော့ နှစ်ချက်ရှိပါတယ်။ အစိုးရအနေနဲ့ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို အထူးအလေးပေး ဆောင်ရွက်ဖို့ပါ။ တိုင်းရင်းသားအားလုံး ညီညီညွတ်ညွတ်ရှိပြီး စည်းလုံးလို့ အင်အားတောင့်တင်းနေရင် ဘယ်တရုတ်နိူင်ငံ ကုလားနိူင်ငံကိုမှ ကြောက်နေဒူးထောက်နေဖို့ အကြောင်းမရှိပါဘူး။ တိုင်းရင်းသားများရဲ့ ယုံကြည်မူကို မတည်ဆောင်နိူင်တဲ့ ဗိုလ်သန်းရွှေရဲ့ အားနည်းချက်တွေ အမှားတွေကိုလည်း လက်ရှိမှာ အမြန်ဆုံး ပြုပြင်စေလိုပါတယ်။ နောက်တချက်ကတော့ အစ္စလာမ်ဘာသာ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များကလည်း ဘင်္ဂလီအရေးကိစ္စသည် ဘာသာအရေးမဟုတ်ပဲ ဘင်္ဂလီလူမျိုးရေးသာဖြစ်ကြောင်းကို ပြည်တွင်းနေမူဆလင်တို့အား အသိပေးထားရန်နှင့် ကိုမြအေးလို ပြတ်ပြတ်သားသား ထုတ်ဖေါ်ကြေညာ ရပ်တည်ပေးဖို့ တိုက်တွန်းရင်း နိဂုံးချုပ်ပါတယ်။
by May Thingyan Hein on Wednesday, June 13, 2012 at 3:05am ·
ဇွန် ၁၃၊ ရန်ုကုန်မြို့။
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့ရဲ့ အခြေအနေ
ဇွန်လ ၁၃၊ ၂၀၁၂
ယနေ့ နံနက် ၈နာရီခွဲ ၀န်းကျင်ခန့်အချိန်မှစပြီး စစ်တွေမြို့တွင်းတွင် လူငါးဦးစသော လူစုလူဝေးဖြင့် အပြင်မထွက်ရဟူသော အမိန့်ကို စစ်တပ်မှ ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်း စစ်တွေမြို့ခံ မြစ်မခ သတင်းထောက်ကသတင်းပို့ပေးပါတယ်။
ဒါ့အပြင် စစ်တွေမြို့ပေါ်က မွတ်ဆလင်တွေကို တနေရာတည်းမှာစုထားပြီး လုံထိန်းဝိုင်းထားတယ်၊ စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့လည်း ဘင်္ဂါလီဒေသခံတဦးက ပြောပါတယ်။
စစ်တွေမြို့က ဒေသခံဘင်္ဂါလီတဦးကို ဖုန်းဆက်မေးမြန်းတော့ လက်ရှိအခြေအနေကို သူက ခုလိုပြောဆိုတယ်။
`ဗလီမှာ ရေသွားခပ်ရတယ်၊ ရေမရတာ ၁၀ ရက်ရှိပြီ၊ မီးကတော့ မနေ့ကစဖြတ်တယ်။ ဆန်ကိုတော့ စစ်တပ်နဲ့ ရန်ကုန်က အလှူရှင်တွေက ပေးတယ်၊ လူမှုရေးအသင်းတွေဆီက ရတယ်၊စားဝတ်နေရေးကတော့ အခက်အခဲရှိနေပြီ၊ အိမ်ပြင်ကို တယောက်ချင်းစီပဲ ထွက်လို့ရတော့တယ်၊ ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်ထားတယ်`ဟု သူက ပြောပါတယ်။
ယနေ့မှာတော့ နေ့လည် ၁နာရီ ၀န်းကျင်ထိ လက်ရှိအခြေအနေအရ စစ်တွေမြို့တွင်းတွင် ငြိမ်သက်လျက်ရှိကြောင်း ဒေသခံတွေဆီက သိရပါတယ်။
ဇွန်လ ၁၂၊ ၂၀၁၂
မနက် (ဇွန်လ ၁၂) ရက်နေ့ ၁၀ နာရီမှာ စစ်တွေကို ဖုန်းခေါ်ပါတယ်။ ဒေသခံ ရခိုင်တိုင်းရင်းသား ကုန်သည်တယောက်ဆီကို ဖုန်းဝင်သွားခဲ့တယ်။ သူ့အသံက တုန်နေတယ်။ ပြီးတော့ စကားလုံးတွေက မကွဲဘူး။
`ခုပဲ ဓည၀တီရပ်ကွက်က ဘုန်းကြီးကျောင်းကို ဘင်္ဂလီတွေ မီးရှို့နေပြီ၊ သူတို့က လူအင်အားများတော့ ဒီက လူတွေ မနိုင်တော့ဘူး၊ ကျနော်လည်း ` ..ဆိုတဲ့ အသံနဲ့အတူ လူအော်သံတွေကြားပြီးစကားမဆုံးခင်မှာပဲ ဖုန်းလိုင်းပြတ်သွားတယ်။
ဖုန်းပြန်ခေါ်ပေမဲ့ ဖုန်းမကိုင်တော့ဘူး။ ဖုန်းမကိုင်လေ ကျမအနေနဲ့ စိတ်ပူမိလေပါပဲ၊ ရှိသမျှ စစ်တွေ ဖုန်းတွေကို တလုံးပြီး တလုံးခေါ်နေမိတယ်။ ခဏကြာတော့ စစ်တွေမြို့မှာ နေထိုင်တဲ့ ဗမာရှေ့နေတဦးဆီကို ဖုန်းဝင်သွားတယ်။
`ဒီမှာက လုံထိန်းရဲကလည်း ခြောက်လှန့်တဲ့ သဘောပဲ ပစ်နေတယ်။ ခုချိန်ထိတော့ တပ်ကလုံးဝ မပစ်ဘူး ။ မီးရှို့တာကတော့ နှစ်ဖက်စလုံးက ရှို့နေကြတာပဲ။ လုံထိန်းတွေက ၀င်ရှို့တာမျိုးလည်း မရှိပါဘူး။ ရိုဟင်ဂျာတွေကတော့ ရခိုင်တွေထက် လူအင်အားပိုများတယ်၊ သူတို့က အုပ်စုအင်အားတောင့်တယ်၊ လုံထိန်းတွေကိုတော့ ကြောက်ပုံမရဘူး`` လို့ ပြောတယ်။
နာရီဝက်လောက် ကြာတော့ မြစ်မခ ရခိုင်ပြည်နယ်သတင်းထောက်က စစ်တွေကနေ ဖုန်းဆက်လာခဲ့တယ်။သူ့အသံကလည်းေ လာလော လောလောနဲ့ပါပဲ။
`နာဇီရပ်ကွက်ကို ဘင်္ဂလီတွေ ၀ိုင်းထားတယ် အမ၊ သူတို့ဘက်က လူ ၁ သောင်းလောက်ရှိတယ်၊ ဒါးတွေ ဒုတ်တွေရော သေနပ်တွေလည်း ပါတယ်။ ဒီမှာရခိုင်နဲ့ ရဲ ၂ ထောင်လောက်က ခုခံနေရတယ်၊ ကျနော်လည်း ပြေးနေရတယ်၊ ခုပဲ ရခိုင်တယောက်အသတ်ခံရတယ်လို့ ကြားတယ်။ လူလတ်ပိုင်းပဲ…ကျနော် ဆက်ပို့ပေးပါမယ်`
အဲလို ပဲ ပြောပြီး ဖုန်းချသွားပြန်တယ်။ စစ်တွေမှာ ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့ နေ့ခင်းပိုင်းကတည်းက အင်တာနက် မရတော့ဘူး၊ စစ်တွေမှာနေထိုင်တဲ့မြစ်မခသတင်းထောက်က ဖုန်းနဲ့ပဲ သတင်းပို့ပေးနေတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းက မြို့နယ်(၄)မြို့နယ်မှာ ဒုက္ခသည်ပေါင်း တစ်သောင်းကျော်ရှိပြီး စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းဒဏ်ရာရရှိသူများ အတွက် အရေးပေါ်ဆေးဝါး အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့လည်း သတင်းထောက်က လှမ်းပြီးသတင်းပို့ပေးတယ်။
“အကူအညီကတော့ လိုအပ်နေတာပဲ ဘာလို့လဲဆိုတော့ နေရာတော်တော်များများမှာ ဒုက္ခသည်တွေ အများကြီးပဲ၊ တစ်သောင်းကျော် လာက်တော့ရှိတယ် ကျွန်တော်တို့ သွားကူညီပေးတာတဲ့ နေရာပေါင်း (၂၇)ခုလောက်ရှိတယ် လာပြီးကူညီပေးနေတာလည်း ရှိတယ်၊ မလုံလောက်ဘူးပေါ့ ဆေးဝါးလည်းလိုတယ် ထိခိုက် ဒဏ်ရာရတဲ့လူတွေလည်း ရှိနေတယ် “ဟု ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေး ပါတီမှ ဗဟိုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက လက်ရှိအခြေအနေကို ပြောပါတယ်။
လက်ရှိ အခြေအနေအရ ဒဏ်ရာရရှိသူ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများရှိသလို၊ ဘင်္ဂါလီများမှာလည်း ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကို မေးမြန်းရင် ရခိုင်ဘက်က ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ ပိုများကြောင်း ဖြေသလို၊ ဘင်္ဂါလီဘက်ကလည်း သူတို့ဘက်က ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ ပိုများတယ်လို့ ဖြေတာပါပဲ။
နှစ်ဘက်စလုံး အပြန်အလှန်ဖြစ်နေကြတဲ့အတွက် ထိခိုက်ဦးရေနဲ့ သေဆုံးဦးရေကိုလည်း အတည်ပြုလို့မရသေးပါဘူး။
ဒုက္ခသည်အရေအတွက်ကိုတော့ ရခိုင်တိုးတက်ရေးပါတီက ခုလို အတည်ပြုပေးပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့နယ် အောင်မြေဗောဓိဓမ္မရိပ်သာတွင် ရခိုင်တိုင်းရင်းသား ဒုက္ခသည်ဦးရေမှာ (၅၅၇)ဦး ၊အလိုတော်ပြည့် ပရဟိကျောင်း(၂၄၇ )ဦး၊ ဗဟိုကျောင်းတွင်(၇၀)ဦး နှင့် (၄)မိုင်ရဲတပ်ရင်း(၂) တွင် (၃၀၀၀)ဦးရေ ၊ စုစုပေါင်း မောင်တောမြို့နယ်တွင် ဒုက္ခသည်ဦးရေ (၇၀၀၀) ဝန်းကျင်ရှိပြီး ၊ စစ်တွေမြို့နယ်ရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့် ပညာသင်ကျောင်းများတွင် ၄၉၀၀ (လေးထောင့်ကိုးရာ )ဦးရေရှိကာ၊ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် ရှိ အ.လ.က ကျောင်းတွင်(၁၃၀၀)ဦးခန့်ရှိကြောင်းနှင့် ရသေ့တောင်မြို့နယ်တွင် ဒုက္ခသည် (၂၀၀၀)၀န်းကျင် ရှိကြောင်း ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများတိုးတက်ရေးပါတီက ပြုစုထားသော စာရင်းများအရ သိရပါတယ်။
လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ ဘူးသီးတောင်၊မောင်တေားဒေသတွေမှာ အကြမ်းဖက်မှုတွေအနေနဲ့ ငြိမ်သက်သွားကြောင်းကိုလည်း သတင်းစကားများအရ ကြားရပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တောနှင့် ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ ရပ်ကွက်နဲ့ကျေးရွာတွေမှာ ဇွန်လ ၈ ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှစတင်ပြီး ဘဂါင်္လီရိုဟင်ဂျာများက လူစုလူဝေးဖြင့် မီးရှို့ခြင်း၊ ရိုက်နှက်ခြင်း၊ လုယက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အတွက်မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ဦးစီးဌာနက အမိန့်အမှတ် ၁/ ၂၀၁၂ဖြင့် ညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်ကြောင်း သိရပါတယ်။
ဇွန်လ ၈ ရက်နေ့ မွန်းလွဲပိုင်းက မောင်တောမြို့မှာ ဘဂါင်္လီရိုဟင်ဂျာထောင်ဂဏန်းခန့်ကှိမြို့မပရိယတ္တိစာသင်တိုက်ကိုဖျက်ဆီးခြင်းနဲ့ မာင်တောမြို့နယ် အတွင်းရှိ ကျေးရွာတွေမှာ လူနေအိမ်များ၊ ဈေးဆိုင်တန်းများ၊ တည်ခိုခန်း စသည်တို့ကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်း၊ ရန်ပြုသတ်ဖြတ်ခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း၊ ထိုကဲ့သို့ ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုများ၊ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှုများ ဖြစ်ပွားနေသည့်အတွက် ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်နှင့်မောင်တောမြို့နယ် တို့တွင် ညမထွက်ရ အမိန့်(ပုဒ်မ ၁၄၄)ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
အဆိုပါကိစ္စရပ်များဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရခြင်းအစမှာ မေလ(၂၈)ရက်နေ့တွင် မသီတာထွေးအသတ်ခံခဲ့ရခြင်းမှ စတင်ခဲ့ပြီး ဂျမာအတ်(၁၀) ဦးအားသတ်ဖြတ်ခဲ့ခြင်းပေါ်မူတည်၍ အဆိုပါ ပြဿနာများဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဇွန်လ ၈ ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် မောင်းတောမြို့၌ ဘင်္ဂလီ ရိုဟင်ဂျာ ထောင်ဂဏန်းခန့်က မြို့မ ပရဟိတ စာသင်တိုက်အား ဖျက်ဆီး ခဲ့ရာမှ ရခိုင် ရိုဟင်ဂျာ အဓိကရုဏ်း ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ အကြမ်းဖျင်းသိထားခဲ့ရပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေကို ကိုယ်တိုင် မျက်စိနဲ့ မမြင်ရပေမဲ့ စစ်တွေမြို့က ရခိုင်ပြည်နယ် သတင်းထောက် ပေးပို့တဲ့ သတင်းတွေနဲ့ အခြား မီဒီယာတွေမှာတက်နေတဲ့သတင်းတွေမှာတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်က အခြေအနေက ဆိုးတာတွေ့ရပါတယ်။
ဘင်္ဂလီတွေ ဘာကြောင့် ဒီလောက်ထိ အကြမ်းဖက်ကြသလဲ၊ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကို သတ်ပြ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေ၊ အိမ်တွေ မီးရှို့ကြသလဲ ဆိုတာကလည်း စဉ်းစားစရာဖြစ်ပါတယ်။ မနေ့က ကြားရတဲ့ သတင်းတွေမှာလည်း ဘင်္ဂလီတွေဘက်က လက်နက်ကြီးနဲ့တောင် ပစ်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ထွက်လာတာလည်း ကြားရတယ်။
အခြားမိတ်ဆွေတယောက်ကလည်း ကျမကို အီးမေးလှမ်းပြီး ပို့တယ်၊ အခုဖြစ်နေတဲ့ ဒေသမှာနေတဲ့ ဘင်္ဂလီတွေကို ရိုဟင်၈ျာလို့ ခေါ်တယ်၊ သူတို့ကလည်း မြန်မာပြည်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်နေလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်၊ ဒီလိုအခြေအနေမှာ အစိုးရနဲ့ ရခိုင်နဲ့ ပေါင်းပြီး သူတို့ဘင်္ဂါလီတွေကို အစားဖြတ်တာတွေ၊ ရေဖြတ်တာတွေ လုပ်နေတယ်။ အိမ်ထဲက အိမ်ပြင်မထွက်ရဘူး၊ ထွက်ရင် လုံထိန်းက ပစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ သူ့မိတ်ဆွေ မိသားစုက အေးအေးချမ်းချမ်းနေတဲ့သူတွေပါ အစ္စလမ်ဘာသာကိုးကွယ်သူတွေဖြစ်ပေမဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေ မရှိပါဘူးလို့လည်း သူက စာထဲမှာ အာမခံပြီး ရေးသားပေးပို့လာပါတယ်။
နိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေမှာတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ရခိုင်တွေနဲ့ မွတ်စ္စလင် ဘာသာရေး ပဋိပက္ခအသွင်နဲ့ ရေးသားနေတာ တွေ့ရတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြိုကနေ ထုတ်ဝေတဲ့ သည်နေရှင်းမှာတောင် ထိုင်းသတင်းထောက်က တကယ့်မြန်မာပြည်ရဲ့ အဖြစ်မှန်ဖြစ်တဲ့ ဘင်္ဂလီတွေရဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေထက် ဘင်္ဂလီတွေကို ရခိုင်နဲ့လုံထိန်းတွေက နှိမ်နင်းနေတဲ့သဘောမျိုးပဲ ဖော်ပြနေကြတယ်လို့လည်း မိတ်ဆွေတယောက်က ဖုန်းဆက်ပါတယ်။
ပြည်ပ မီဒီယာတွေအနေနဲ့ ပြည်တွင်းက ရခိုင်ဒေသကိုသွားရောက်ပြီး သတင်းမယူနိုင်ကြတဲ့အတွက် သတင်းတွေ လွဲနေတာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လည်း ယူဆမိကြောင်း မိတ်ဆွေက ပြောတယ်။
ပြည်တွင်း ဂျာနယ်တွေနဲ့ ပြည်တွင်းက သတင်းမီဒီယာတွေကတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ သတင်းထောက်တွေ ရှိကြတယ်။ ရခိုင်သတင်းထောက်မရှိတဲ့သတင်းဌာနတွေကလည်း သတင်းထောက်တွေကို စေလွှတ်ကြတယ်၊ ဒါ့အပြင် အချိန်ပြည့် ၂၄နာရီ နီပါး တယ်လီဖုန်းတွေနဲ့ သတင်းယူကြပြီး အချိန်နဲ့အမျှ ရေးသားနေကြတယ်။
လူမှုရေးကွန်ယက်လို့ ပြောတဲ့ facebook နဲ့ ကိုယ်ပိုင် ဘလော့တွေ ပေါ်မှာတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်အခြေအနေကို အမြင် သုံးမျိုးနဲ့ ရေးသားနေကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ အမြင်တမျိုးကတော့ ဒါဟာ အစိုးရဘက်က ဆင်တဲ့ ထောင်ချောက်လို့ ပြောပြီးရေးသားနေတယ်။
နောက်အမြင်တမျိုးကတော့ ရခိုင်-ဘင်္ဂလီ ပြဿနာဟာရဲ့ နောက်မှာ ရိုဟင်ဂျာပြဿနာရှိတယ်၊ မြန်မာအစိုးရနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ အကြပ်အတည်းဖြစ်စေရုံသာမက၊ ရိုဟင်ဂျာတွေအနေနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရှိရေးအထိ တောင်းဆိုဖို့ စီမံကိန်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကို အချက်အလက်တွေနဲ့ ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။
နောက်တမျိုးကတော့ မြန်မာမွတ်စ္စလင်တွေကို ရခိုင်နဲ့အစိုးရပေါင်းပြီး အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်နေပြီ၊ ရခိုင်နဲ့ မွတ်စလင် ပြဿနာမှာ အစိုးရဘက်က ရခိုင်ဘက်ကို လိုက်တယ်၊ မွတ်စလင်တွေကို သတ်ပစ်တယ်ဆိုပြီး ရေးသားနေကြတယ်။
ကျမအနေနဲ့ကတော့ အမြင် ၃ မျိုးစလုံးရေးသားကြတာတွေကို ဖတ်ပါတယ်။ စဉ်းလည်း စဉ်းစားကြည့်ပါတယ်။
အချက်အလက်တွေနဲ့ သမိုင်းနောက်ခံအကြောင်းရင်းတွေပေါ်မှာ အရင်းခံပြီးစဉ်းစားကြည့်ဖို့၊ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် စဉ်းရတောမယ့်အနေအထား ဖြစ်နေတယ်လို့လည်း ယူဆမိတယ်။
စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင် သမိုင်းနဲ့နောက်ခံအကြောင်းအရာတွေကိုလည်း မသိရင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်စဉ်းစားနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့လည်း နားလည်မိပါတယ်။
တကယ်တော့ ရိုဟင်ဂျာ ခေါ်၊ ဘင်္ဂါလီ အကြမ်းဖက်သမားတွေက ကျမတို့ မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေတော့ မဟုတ်ကြပါဘူး။ သမိုင်းမှတ်တမ်းတွေထဲမှာလည်း ရိုဟင်ဂျာတွေကို တိုင်းရင်းသားတွေထဲမှာ ထည့်မထားဘူး ဆိုတာကိုတော့ ကျမ အနေနဲ့ သေသေချာချာ ခိုင်ခိုင်မာမာ ပြောနိုင်ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ သမိုင်းကို ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဓည၀တီ(စစ်တွေခရိုင်) ၊ ရမ္မ၀တီ(ကျောက်ဖြူခရိုင်)နှင့် မေဃ၀တီ(မာန်အောင်ခရိုင်) စသည့် ၀တီလေးရပ်နှင့် ပေါင်းစည်း အပ်သော ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဓည၀တီခေတ်၊ ဝေသာလီခေတ်၊ လေးမြို့ခေတ်၊ မြောက်ဦးခေတ် ဟူ၍ ခေတ်လေးခေတ် ထွန်းကားခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။
သမိုင်းသုတေသနဦးစီးဋ္ဌာနရဲ့ ရခိုင်သမိုင်း မှတ်တမ်းများအရ ဓည၀တီခေတ်သည် ဘီစီ ၃၃၅၂မှ အေဒီ ၃၂၇ အထိ ရှည်ကြာခဲ့ပြီး ခေတ်ဦးရခိုင်တွင် တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ လေးမြို့ခေတ်တွေမှာ ကိုးကွယ်သော ဘာသာအနေနဲ့ ဟိန္ဒူ ဘာသာနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ဖြစ်သည်ကို တွေ့ရပါတယ်။
အေဒီ ၁၄၃၀ မှ ရခိုင်ကို ဗဒုံမင်း တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့ အေဒီ ၁၇၈၄ အထိ မည်သူမျှ မွတ်ဆလင်များ မဟုတ်ခဲ့ကြောင်း၊ ရခိုင်တွင် ဘုရင် ၄၈ ဦးနန်းတက်ခဲ့ရာ ၉ဦးသာ မွတ်ဆလင်အမည်ဖြင့် ဒင်္ဂါးသွန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်း ၉ဦးသည် စစ်တ ကောင်းကို သိမ်းပိုက်အောင်နိုင်ခဲ့သည့် ဘုရင်များဖြစ်သဖြင့် လက်အောက်ခံဒေသတွင် ရှိသည့် ပြည်သူတို့၏ ကြည်ညိုမှု ရရှိ အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်းသာ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း သမိုင်းသုတေသနဦးစီးဌာနရဲ့ မော်ကွန်းမှာ တွေ့မြင်ရပါတယ်။
ရခိုင်ဘုရင်လက်ထက်က ရှိစဉ်က သုံ့ပန်းအဖြစ် ဖမ်းဆောင်ခေါ်ယူလာသော မွတ်ဆလင်တွေကို လယ်ယာလုပ်ငန်းတွေမှာ လည်းကောင်း၊ အခြားအမှုထမ်းလုပ်ငန်းများမှာ လည်းကောင်း ပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဘင်္ဂေါနယ်မှ အခြေချနေထိုင်လာတဲ့ မွတ်ဆလင်တွေကို ရခိုင်ဒေသတွင်း ၁၅ရာစုတွင် စတင်ရောက်ရှိ လာခဲ့ကြောင်း သမိုင်းသုတေသနဌာန၊ မော်ကွန်းအထောအထားများအရ သိရပါတယ်။
ဗြိတိသျှကိုလိုနီခေတ် ဘင်္ဂါလီမွတ်ဆလင် ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ ၀င်ရောက်လာခဲ့ခြင်း
တကယ်တော့ ကျမတို့ တိုင်းပြည်ထဲကို ဘင်္ဂါလီမွတ်ဆလင်တွေ စတင်ရောက်ရှိလာခဲ့တာက ကိုလိုနီခေတ်မှာဖြစ်ကြောင်း သမိုင်းအထောက်အထားများအရ သိရပါတယ်။
၁၇၈၅ ခုနှစ်တွင်ဗဒုံမင်းက ရခိုင်ပဒေသရာဇ်နယ်ကို သိမ်းပိုက်ပြီးနောက် အင်္ဂလိပ်တို့ သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ ဘင်္ဂါနယ်နဲ့ဆက်စပ်လာရာမှာ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ ဆက်ဆံရေးမှာ တင်းမာမှုဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက် ၁၈၂၄ တွင် ရှင်မဖြူကျွန်းကို အကြောင်းပြုပြီး အင်္ဂလိပ်- မြန်မာ ပထမစစ်ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ရန္တပိုစာချုပ်ဖြင့် စစ်ရပ်စဲခဲ့ရတယ်၊
အဆိုပါစာချုပ်အရ ရခိုင်နဲ့တနသာင်္ရီက အင်္ဂလိပ် တို့လက်အောက်သို့ ရောက်သွားခဲ့ပြီး ရခိုင်ြပြည်နယ်က အင်္ဂလိပ်တို့ သိမ်းပိုက်ထားပြီးဖြစ်တဲ့ ဘင်္ဂလားနယ်များနဲ့ တစ်ပေါင်းတည်းတည်ရှိလာခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
ထိုမှ စပြီး ဘင်္ဂါနယ်မှ မွတ်ဆလင်များ နှစ်စဉ်တိုးလာရခြင်းက ဒေသခံရခိုင်တို့အတွက် နောင်ကာလတွင် အန္တရာယ်ကြီး ဖြစ်လာစေနိုင်တယ်လို့ ဗြိတိသျှအာဏာပိုင်တို့က ယခင်ကပင် သတိပေးခဲ့သည်ကိုလည်း သမိုင်းသုတေသနဌာနက မှတ်တမ်းများအရ တွေ့ရပါတယ်။
လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ မွတ်ဆလင်တို့ အခြေအနေ
၁၉၄၈ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ (၄) ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့ရာ နိုင်ငံတော်အား ဖဆပလ အစိုးရက အုပ်ချုပ်ခဲ့ တယ်၊ ထိုကာလ ရခိုင်တွင်(ရတည) အဖွဲ့က ရခိုင်ပြည်နယ် ရရှိရေးကို အကြောင်းပြု၍ စည်းရုံးလှုပ်ရှားနေပြီး၊ လွတ်လပ်ရေး မရမီကပင် ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ မူဂျာဟစ်အဖွဲ့က လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက် ပိုမိုအင်အားတောင့်တင်းလာခဲ့တာကို သမိုင်းမှတ်တမ်းအရ သိရပါတယ်။
၁၉၄၈ မှာ မွတ်ဆလင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ညီလာခံကို မောင်းတော့မြို့နယ်၊ ကရဗျင်ရွာမှာ ကျင်းပစဉ် အဖွဲ့အမည်ကို မူဂျာဟစ်လို့ တရားဝင်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ အဖွဲ့ရဲ့ စစ်ရေးခေါင်းဆောင်မှာ Jaffar Kawal ဖြစ်ပြီး လက်ထောက်မှာ ဟူစိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းတို့ရဲ့ တောင်းဆိုချက်ထဲမှာ ကုလားတန်မြစ် အနောက်ဘက်ကမ်းနှင့် နတ်မြစ်အရှေ့ဘက်ကမ်းကြားဒေသကို မွတ်ဆလင် တို့၏ National Home အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးရန်၊ရခိုင်ရှိ မွတ်ဆလင်များကို တိုင်းရင်းသားစာရင်းထဲ ထည့်သွင်းပေးရန်၊ စသည့်အချက်များပါဝင်ကြောင်း သမိုင်းမှတ်တမ်းတွေမှာတွေ့ရှိရပါတယ်။
မူဂျာဟစ်ပြဿနာကတော့ လောလောဆယ်အားဖြင့် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီး၏ ဆိုးမွေတစ်ရပ်ဖြစ်သော်လည်း အတိတ်အားဖြင့် ၁၈၂၄ ခုနှစ် အင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲအပြီးဘင်္ဂါလီများ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းသို့ဝင်ရောက်လာခြင်းမှ မြစ်ဖျားခံခဲ့ကြောင်း တွေ့ရပါတယ်။ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တော၊ ကျောက်တော်၊ မင်းပြား၊ မြေပုံ စသည့်ဒေသများသို့ အစ္စလမ်ဘာသာကိုးကွယ်သူ စစ်တကောင်း ဘင်္ဂါလီများ အတားအဆီးမရှိ ၀င်ရောက်လာခြင်းမှ စတင်ခဲ့ပါတယ်။
မူဂျာဟစ်အဖွဲ့များဖြစ်သော အဒူဇော်လီအဖွဲ့၊ ဘီအေဇော်ဖောအဖွဲ့၊ ဇာဖော်အဖွဲ့တို့အား ပူးပေါင်းစေခဲ့ပြီး ၎င်းအဖွဲ့ရဲ အမည်ကို ရိုဟင်ဂျာအမည် ထည့်သွင်းအသုံးပြုကာ “ ရိုဟင်ဂျာ အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးပါတီ” လို့ ဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းသိရပါတယ်။
၎င်းပါတီက ရခိုင်ပါတီများဖြစ်သော ရခိုင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးပါတီ (ရမလ)၊ ရခိုင်ပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ(ရကပ) တို့ကို ညီညွတ်ရေး ကမ်းလှမ်းခဲ့ကြသည်။ ဆွေးနွေးမှု ပြုလုပ်ရာတွင် (ရမလ)က တစ်ပါတီဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် တင်ပြသော်လည်း (ရကပ)က တပ်ပေါင်းစုဖြစ်ရေးတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ ရိုဟင်ဂျာပါတီက အောက်ပါ အချက်များကို တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာပါတီက ရိုဟင်ဂျာကို တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုရန်၊
ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောနယ်ကို ရိုဟင်ဂျာဒေသအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုရန်၊
ရခိုင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်သည့်အခါ အုပ်ချုပ်ရေးတွင် ရခိုင် ၆၀% ၊ ကုလား ၄၀%၊ ပါဝင်ရန် တို့ပါဝင်ပါတယ်။
အမှန်တကယ်အားဖြင့် ၎င်းအချက်များသည် စစ်ပြီးစ အလယ်သံကျော် မွတ်ဆလင် ညီလာခံက ချမှတ်ထားသော အခြေခံအချက်များကို ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
(ရကပ)က ထိုတောင်းဆိုချက်များကို လောလောဆယ် သဘောတူညီမှု မပေးနိုင်သော်လည်း တဖြည်းဖြည်းညှိနှိုင်းသွားမည်ဟု ပြန်ကြားခဲ့သည်။
သို့သော် အင်အားချိနဲ့နေသော အဖွဲ့များဖြစ်သဖြင့် ရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့၏ တောင်းဆိုချက်အချို့ကို လိုက်လျောခဲ့ရသည်ဟု ဆိုသည်။
၎င်းတို့မှာ ရိုဟင်ဂျာပါတီသည် ရိုဟင်ဂျာ(ဘင်္ဂါလီ)၏ တစ်ခုတည်းပါတီ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။-
ထို့ကြောင့်ကုလားအများအပြားရှိသော မောင်တော၊ဘူးသီးတောင်အနောက်ဘက် တောင်ရင်းပိုင်းသည်လည်းကောင်းဘူးသီးတောင်မြို့နယ် ညောင်ချောင်းနှင့် ညောင်ချောင်းအထက်ပိုင်းသည်လည်းကောင်း၊ ရိုဟင်ဂျာ(ကုလားများ) နယ်မြေဖြစ်သည်။- ပူးတွဲစစ်ကော်မတီ၏ အကြီးအကဲသည် စစ်အင်အားများသော ရိုဟင်ဂျာပါတီမှ ဖြစ်ရမည် ဟူသော အချက်များဖြစ်သည်။ ` ဟု ၄င်းတို့ဘက်မှ တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်း မူဂျာဟစ်အလင်းဝင်ခြင်း မှတ်တမ်းတွင် တွေ့မြင်ရပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်တို့ ရခိုင်ဒေသကို သိမ်းပိုက်ချိန်ထိ ရိုဟင်ဂျာမပေါ်သေးပါဘူး။ ကိုလိုနီခေတ်သမိုင်းရေးသားခဲ့သော ဆရာတွေမှာလည်း အဆိုပါ အသုံးအနှုန်းမရှိသေးကြောင်း အတည်ပြုပြောဆိုကြပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းက ၁၉၄၇-ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာသာ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပြီး၊ လွတ်လပ်ရေးရပြီးခေတ်နောက်ပိုင်းမှာ ခေတ်ပညာတတ်ဘင်္ဂလီများက သမိုင်းကို ဖန်တီးယူပြီး ရိုဟင်ဂျာကို တိုင်းရင်းသားဖြစ်အောင် ဖန်တီးရေးသားခဲ့တယ်လို့ သမိုင်းသုတေသနဦးစီးဋ္ဌာနက မော်ကွန်းဌာနစုရဲ့ မှတ်တမ်းများအရသိရပါတယ်။
မောင်းတောမြို့နယ် ဖြစ်စဉ်သမိုင်းရဲ့ ဖော်ပြချက်မှာတော့ ရိုဟင်ဂျာဟူသောစကားကို အလံနီကွန်မြူနစ်များက မူဂျာဟစ် သူပုန်များအတွက် ထွင်ပေးခဲ့သော အမည်ဖြစ်ပြီး၊ ၁၉၅၀ ခုနှစ်ပိုင်းများက အလံနီများနှင့်မူဂျာဟစ်များက ယာယီမဟာမိတ်ဖွဲ့ထားပြီး ဖဆပလအစိုးရကို တိုက်ခိုက်နေသော အချိန်လည်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။
ဘူးသီးတောင် ပါလီမန်အမတ် အဒူဂေါ်ဖော်(ဂဖါး)က ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ် ဧပြီ ၂၁ရက်နေ့ ရန်ကုန်တွင် ပြုလုပ်သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ရခိုင်၊ ပထန်နှင့် အာရပ်တို့ သွေးနှောရာမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော လူမျိုးသည် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဖြစ်သည်ဟုလည်းကောင်း၊ ရခိုင်၊ ဘင်္ဂါလီ၊ အူရဒူ၊ ပါရှန်၊ အာရဘီစကားများကို ရောနှော၍ ဖြစ်ပေါ်လာသော စကားသည် ရိုဟင်ဂျာ စကားဖြစ်ကြောင်း တင်ပြခဲ့သည်ဟု သမိုင်းမှတ်တမ်းမှာ ဖော်ပြထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
ဘင်္ဂါလီတို့အနေဖြင့် ရိုဟင်ဂျာဟု သမ်ိုင်းအထောက်ထားများဖြင့် ခေါ်ဆိုနေသော်လည်း ရိုဟင်၈ျာလူမျိုးဟုပြောဆိုနေကြသော်လည်း ၁၉၄၇ ခုနှစ်ထိ မည်သည့်သမိုင်းအထောက်အထားတွင်မှ ပါဝင်ခဲ့ခြင်း မရှိသည်ကို တွေ့ရကြောင်း ရခိုင်သမိုင်းသုတေသနအသင်းမှ သိရှိရပါတယ်။
၁၉၆၂ နောက်ပိုင်း အခြေအနေ
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်းအာဏာယူပြီးချိန် ၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ တော်လှန်ရေးကောင်စီလက်ထပ်တွင် ဘင်္ဂါလီတို့၏ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုသည် ခေတ္တငုတ်လျှိုးသွားခဲ့ပါတယ်။
၁၉၇၄ တွင် ဘီအေဇော်ဖောအဖွဲ့ တပ်မတော်ထိုးစစ်ကြောင့် ပြိုကွဲသွားပြီး ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောရှိ မူဂျာဟစ်သူပုန်တို့ကလည်း တစ်ဖက်နိုင်ငံများသို့ ထွက်ပြေးခဲ့ရကြောင်း သိရပါတယ်။
အဆိုပါ ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီခေတ်တွင်လည်း ရခိုပြည်နယ်က မွတ်ဆလင်များတောင်းဆိုချက်ကို ဖယ်ရှားခဲ့ပြီး ဘူးသီးတောင်၊မောင်းတောမြိုကနယ်ရှိ စစ်တကောင်းသား မွတ်ဆလင်တွေကို ပါတီ၊ကောင်စီအာဧာရအဖွဲ့အစည်းတွင် ပါဝင်ခွင့်ကိုလည်း ကန့်သတ်ထားခဲ့တယ်လို့ မောင်းတောမြို့နယ် ဖြစ်စဉ်သမိုင်း ၄၉၊ ၅၁ မှတ်တမ်းအရ သိရပါတယ်။
သို့ပေမဲ့ အဆိုပါဒေသတွေမှာ မွတ်ဆလင်ဦးရေကတော့ တိုးမြဲတိုးနေခဲ့တာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။
by May Thingyan Hein on Wednesday, June 13, 2012 at 5:46am ·
အခြေခံဥပဒေကို မလိုက်နာလို့ အခြေခံ ဥပဒေရုံးက ဒီနေ့ ...
Canada calls for peaceful solution in Rekhine Stat...
ရိုဟင်ဂျာ များ အပေါ် ဒီအေဘီ သဘောထား များချမှတ်ခဲ့ ...